1Sainte Bokin 'Kings – 2trondro
Home / Baiboly / Testamenta Taloha / 1Sainte Bokin 'Kings
1:1 Ary Davida mpanjaka dia efa zokiolona, ary andro maro izy fony mbola velona. Ary na dia efa rakotra lamba, dia tsy faly.
1:2 Noho izany, ny mpanompony nanao taminy hoe:: "Aoka isika hitady, fa ny mpanjaka tompoko, zazavavy virijina. Ary aoka hitoetra eto anatrehan'ny mpanjaka, ary mafana azy, dia hatory teo an-tratrany, sy hanome hafanana ho an'ny mpanjaka tompoko. "
1:3 Ary Ary dia nitady zazavavy tsara tarehy tany amin'ny faritra rehetra amin'ny Isiraely. Ary nahita an'i Abisaga, Sonemita, ary izy ireo nitondra tany amin'ny mpanjaka.
1:4 Ary ilay zazavavy dia tsara tarehy indrindra. Dia lasa nodimandry any amin'ny mpanjaka, dia nanompo azy. Na izany aza tena, ny mpanjaka tsy nahalala azy.
1:5 Ary Adonia, ny zanak'i Hagita, , nanandratra ny tenany, nanao hoe:, "Izaho no hanjaka!"Ary notendreny ho an'ny tenany kalesy sy mpitaingin-tsoavaly, amin'ny dimam-polo lahy izay ho mpihazakazaka eo alohany izy.
1:6 Ary tsy ny rainy hofaizako Izy na oviana na oviana, nanao hoe:, "Nahoana ianao no nanao izany zavatra izany?"Fa Izy, koa, tena tsara tarehy, ny faharoa amin'ny fiterahana, nanaraka an'i Absaloma.
1:7 Ary efa niresaka tamin'i Joaba, , zanak'i Zeroia,, sy Abiatara, ny mpisorona, izay nanome fanampiana hatramin'ny ilany Adonia.
1:8 Na izany aza tena, Zadoka, ny mpisorona, ary Benaia, ny zanak'i Joiada, sy Natana, ny mpaminany, sy Simey sy Rey, ary ny matotra miaramila Davida tsy mba niandany tamin'i Adonia.
1:9 Ary Adonia, manana ondrilahy sy ny sorona isan-karazany janak'omby sy ny ondry matavy amin'ny ondry afa-tsy ny vato ny Serpent, izay tao amin 'etỳ amin'ny manodidina ny loharano rogela, namory ny rahalahiny, ny zanaky ny mpanjaka,, ary ny lehilahy rehetra amin'ny Joda,, ny mpanompon 'ny mpanjaka.
1:10 Fa tsy hiantso Nathan, ny mpaminany, ary Benaia, ary ny olona matotra, ary Solomona, rahalahiny.
1:11 Ary dia hoy i Natana tamin'i Batseba, , renin'i Solomona: "Moa tsy renao va fa efa manjaka Adonia, ny zanak'i Hagita, dia nanomboka nanjaka, ka ny tompoko tsy mahalala Davida izany?
1:12 Koa ankehitriny, ho avy, nanaiky ny torohevitro, ary vonjeo ny ainao sy ny ain'i Solomona zanakao.
1:13 Mandehana, ka hiditra amin'i Davida mpanjaka, ka lazao aminy: 'Tsy ianao no tsy, ny mpanjaka tompoko, hianiana amiko, ny ankizivavinao, nanao hoe:: "Solomona zanakao no hanjaka handimby ahy, ary izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako?"Ary nahoana no Adonia no manjaka?'
1:14 Ary raha mbola miteny ianao tamin'ny mpanjaka tao, Dia hiditra any aorianao, ary Izaho hamita ny teninao. "
1:15 Ary Batseba dia niditra tao amin'ny mpanjaka tao amin'ny efi-trano. Ary ny mpanjaka efa antitra, ary Abisaga, Sonemita, dia nanompo azy.
1:16 Batseba niankohoka, ary izy ka hajaina ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka taminy, "Inona no irinao?"
1:17 Sy ny fandraisana andraikitra, hoy izy: "Tompoko, izay nianiananao tamin'ny mpanompovavinao, Tompo Andriamanitrao: 'Solomona zanakao no hanjaka handimby ahy, ary izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako. '
1:18 Ary ankehitriny, indro, Adonia no manjaka, raha ianao, ny mpanjaka tompoko, tsy mahalala izany.
1:19 Izy efa namono omby, ary isan-karazany ny biby fiompy mifahy, ary maro ondrilahy. Ary efa namory ny zanakalahin'ny mpanjaka, ary koa Abiatara, ny mpisorona, ary Joaba, ny mpitarika ny miaramila. fa Solomona, mpanomponao, tsy ampanalao.
1:20 marina tokoa izao, ny mpanjaka tompoko, ny mason'ny Isiraely rehetra mijery amin'ny famindram-po eo aminareo, mba mampiseho amin'izy ireo izay tokony hipetraka eo amin'ny seza fiandriananao, ny mpanjaka tompoko, Mandrosoa alohako.
1:21 Raha tsy izany, izany dia ho: rehefa ny mpanjaka tompoko matory amin'ny razany, Izaho sy Solomona zanako no ho toy ny mpanota. "
1:22 Ary raha mbola niteny izy tamin'ny mpanjaka, Nathan, ny mpaminany, tonga.
1:23 Ary nanambara amin'ny mpanjaka, nanao hoe:, "Nathan, ny mpaminany, eto. "Ary rehefa niditra tao an-imason'ny mpanjaka, ary efa ka hajaina mora eny an-kianja,
1:24 hoy Natana: "Ry mpanjaka tompoko ô, hoy ianao no, 'Aoka Adonia hanjaka handimby ahy, ary aoka izy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako?'
1:25 Fa amin'izao andro izao, dia nidina, ary sorona omby, ary omby matavy, ary maro ondrilahy. Ary namory ny zanakalahin'ny mpanjaka, ary ny mpitarika ny tafika, niaraka tamin'i Abiatara, ny mpisorona. Ka dia nihinana sy nisotro teo anatrehany, ary nanao hoe:, 'Raha velona Adonia mpanjaka.'
1:26 Fa tsy hiantso ahy, mpanomponao, ary Zadoka, ny mpisorona, ary Benaia, ny zanak'i Joiada, ary Solomona, ny mpanompo ambany.
1:27 Mety izao teny izao, dia nivoaka avy tamin'ny mpanjaka tompoko, ary mety ianao tsy efa nilaza izany tamiko, mpanomponao, toy ny hoe iza no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny mpanjaka tompoko handimby anao?"
1:28 Ary namaly Davida mpanjaka, nanao hoe:, "Antsoy amiko Batseba." Ary nony efa niditra teo anatrehan'ny mpanjaka, ary efa nitoetra teo anatrehany izy,
1:29 ny mpanjaka nianiana ka nanao hoe:: "Raha velona koa Jehovah, Izay efa namonjy ny fanahiko tamin'ny fahoriana rehetra,
1:30 araka izay nianianany taminao tamin'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely,, nanao hoe:: 'Solomona zanakao no hanjaka handimby ahy, ary izy no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako hisolo ahy,'Dia toy izany no hataoko anio. "
1:31 ary Batseba, rehefa nampidina ny niankohoka tamin'ny tany, ka hajaina ny mpanjaka, nanao hoe:, "Enga anie tompoko velona mandrakizay anio Davida."
1:32 Ary hoy Davida mpanjaka, "Antsoy hankatỳ amiko Zadoka, ny mpisorona, sy Natana, ny mpaminany, ary Benaia, zanak'i Joiada. "Ary rehefa niditra teo anatrehan'ny mpanjaka,
1:33 dia hoy izy taminy: "Ento miaraka aminareo ny mpanompon'ny tomponareo, ary apetraho Solomona zanako eo amin'ny mule. Ary mitondra azy nankany Gihona.
1:34 Ary aoka Zadoka, ny mpisorona, sy Natana, ny mpaminany, hanosotra azy amin'izany toerana ho mpanjakan'ny Isiraely. Ary dia hitsoka ny anjomara, ary ianao dia hanao hoe:, 'Raha mbola velona koa i Solomona mpanjaka.'
1:35 Ary ianao no hiakatra hanaraka azy, ary izy no tonga ka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako. Ary izy no nanjaka teo amin 'ny toerana. Ary handidy Aho, raha tonga ny mpanapaka ny Isiraely sy ny Joda. "
1:36 ary Benaia, ny zanak'i Joiada, namaly ny mpanjaka, nanao hoe:: "Amen. Ary hoy Jehovah, Andriamanitry ny mpanjaka tompoko.
1:37 Toy izany koa fa ny Tompo dia efa tamin'ny mpanjaka tompoko, dia mety raha tonga tamin'i Solomona. Ary enga anie izy ho ambony dia ambony kokoa ny seza fiandrianany noho ny seza fiandriananao ny tompoko, Davida mpanjaka. "
1:38 Ary Zadoka, ny mpisorona, sy Natana, ny mpaminany, nidina, amin'ny Benaia, ny zanak'i Joiada, ary ny miaramila mpiambina andriana ary ny mpiambina andriana. Ary Solomona napetrany teo amin'ny ampondra Davida mpanjaka, ka nitondra an'i Jesosy ho any Gihona.
1:39 ary Zadoka, ny mpisorona, naka ny tandroka misy diloilo avy amin'ny tabernakely, ary nanosotra an'i Solomona. Dia nitsoka ny anjomara. Ary hoy ny vahoaka rehetra, "Raha mbola velona koa i Solomona mpanjaka."
1:40 Ary ny vahoaka iray manontolo niakatra nanaraka azy. Ary ny olona dia nilalao tao amin'ny fantsona, ary ny fifaliana amin'ny fifaliana lehibe. Ary ny tany nanakoako teo anoloan'ny feon'ny azy.
1:41 Ary Adonia, ary izay rehetra efa nampiantso ny azy, nandre izany. Ary ankehitriny, efa tapitra ny andro firavoravoana. Avy eo, koa, Joaba, nandre ny feon 'ny anjomara, nanao hoe:, "Inona no dikan 'izany tabataba avy amin'ny tanàna be tabataba?"
1:42 Ary raha mbola niteny, Jonathan, ny zanak'i Abiatara mpisorona, tonga. Ary Adonia nanao taminy hoe:, "Midira, fa Hianao no lehilahy, ary mitatitra ny vaovao tsara. "
1:43 Ary Jonatana namaly an'i Adonia: "Tsy izany mihitsy. Fa Davida mpanjaka tompontsika efa nanome an'i Solomona ho mpanjaka.
1:44 Ary efa naniraka an'i Zadoka, ny mpisorona, sy Natana, ny mpaminany, ary Benaia, ny zanak'i Joiada, ary ny miaramila mpiambina andriana ary ny mpiambina andriana. Ary izy ireo no nametraka azy teo amin'ny ampondra ny mpanjaka.
1:45 ary Zadoka, ny mpisorona, sy Natana, ny mpaminany, efa voahosotra ho mpanjaka, tao Gihona. Ary izy ireo niakatra avy teo, faly, ary toy izany koa ny tanàna manako. Izany no hotakotaka renareo izay.
1:46 Fa koa, Solomona mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana.
1:47 Ary hoy ny mpanompon'ny mpanjaka, miditra, efa nitso-drano an'i Davida mpanjaka tompontsika, nanao hoe:: 'Andriamanitra anie hanamafy ny anaran'i Solomona mihoatra noho ny anaranao, ary aoka izy hankalaza ny seza fiandrianany ambonin'ny seza fiandriananao. 'Ary ny mpanjaka ka hajaina dia niala tao ampandriany.
1:48 Ary hoy izy:: 'Isaorana anie ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,, Iza ankehitriny efa nomena olona hipetraka eo amin'ny seza fiandrianako, raha ny masoko hizahako azy. ' "
1:49 Noho izany, ireo rehetra izay efa nampiantso ny Adonia Natahotra. Ary nitsangana izy rehetra, ary samy lasa ny fomba.
1:50 Ary Adonia, matahotra an'i Solomona, niainga ka lasa nandeha. Ary nandray nangia ny tandroky ny alitara.
1:51 Ary nilaza tamin'i Solomona, nanao hoe:: "Indro, Adonia, matahotra an'i Solomona mpanjaka, no mahazo ny tandroky ny alitara, nanao hoe:: 'May Solomone mpanjaka hianiana amiko aloha fa tsy hatao maty ny mpanompony amin'ny sabatra.' "
1:52 Dia hoy Solomona: "Raha izy no lehilahy tsara fanahy, tsy dia be toy ny volon-dohany, dia ho latsaka amin'ny tany. Fa raha ny ratsy no hita ao aminy, dia ho faty. "
1:53 Noho izany, naniraka Solomona mpanjaka ka nitondra azy hiala amin'ny alitara. ary raha niditra, izy ka hajaina Solomona mpanjaka. Dia hoy Solomona taminy, "Mandehana any an-tranonao."
1 Mpanjaka 2
2:1 Ary ny andron'i Davida efa manakaiky, ka dia ho faty, ary Solomona zanany toromarika, nanao hoe::
2:2 "Izaho hiditra ny lalana rehetra eto an-tany. Be hery ka ho lehilahy tsara fanahy.
2:3 Ary hitandrina ny fikarakarana 'ny Tompo Andriamanitrao, mba handeha amin'ny lalany, mba hikarakara ny fombafomba, ary ny didiny, sy fitsipika, ary ny fijoroana ho vavolombelona, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy. Tahaka izany anie ianao hahatakatra ny zavatra rehetra ataonao, Na izany na tsy tari-dalana mba miverena ianao.
2:4 Ho tahaka izany anie ny Tompo manamafy ny teniny, izay efa nolazainy momba ahy, nanao hoe:: 'Raha ny zanakao no hiambina ny alehany, Ary raha handeha eo anatrehako amin'ny fahamarinana, amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra, any no tsy halaina aminao ny lehilahy anankiray avy amin'ny seza fiandrianan'ny Israely. '
2:5 koa, fantatrao izay nataon'i Joaba, , zanak'i Zeroia,, no nanao tamiko, ilay nataony tamin'izy roa lahy mpitarika ny miaramilan'ny Isiraely, ho Abner, ny zanak'i Nera, ary Amasa, ny zanak'i Jatera. Dia namono azy ireo, ary noho izany dia nandatsaka ny ran'ny ady soa aman-tsara ny fotoana, Ary nametraka ny fandatsahan-dra ny ady ny fehikibo, izay tamin'ny valahany, sy ny kapany, izay teny an-tongony.
2:6 Noho izany, hanao zavatra araka ny fahendrenao. Ary aza mamela ny volo fotsiny ho voatariky maty soa aman-tsara.
2:7 Avy eo, koa, fahasoavana hamaly ny zanak'i Barzilay Gileadita. Ary dia hamela azy ireo mihinana eo amin'ny latabatrao. Fa nihaona amiko, fony nandositra ny tavan'i Absaloma, rahalahinao.
2:8 koa, fa ao aminao koa Simey, ny zanak'i Gera, ny zanak'i Benjamina, avy any Bahorima, izay nanozona ahy tamin'ny ozona mafy, rehefa nandeha ho any an-toby. Ary nidina hitsena ahy, rehefa niampita an'i Jordana, ka nianiana taminy ny Tompo, nanao hoe:, 'Tsy hamono anao amin'ny sabatra,'
2:9 nefa aza misafidy ny hitondra azy miova tsy toy ny tsy manan-tsiny. Koa satria ianao ny olon-kendry, ho fantatrao izay tokony hatao aminy. Ary ianao dia hitarika misaotra ny fotsy volo, ka maty izy ra. "
2:10 Ary noho izany, Davida dia lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao an-Tanànan'i Davida.
2:11 Ary nandritra ny andro izay nanjakan'i Davida tamin'ny Isiraely dia efa-polo taona: no nanjakany fito taona tao Hebrona, telo amby telo-polo tany Jerosalema.
2:12 Ary Solomona dia nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'i Davida rainy, ary ny fanjakany dia natanjaka indrindra.
2:13 ary Adonia, ny zanak'i Hagita, niditra tao amin'i Batseba, , renin'i Solomona. Ary hoy izy taminy, "Moa ve ny fidirana am-pilaminana?"Hoy ny navaliny, "Tsy am-pilaminana."
2:14 Ary hoy koa izy, "Ny teny dia ho anareo." Ary hoy izy taminy, "Lazao." Ary hoy izy::
2:15 "Hianao mahalala fa ahy ny fanjakana, ary izay rehetra amin'ny Isiraely efa nisafidy ahy ho an'ny tenany ho mpanjaka. Fa ny fanjakana kosa dia nafindra, ary efa lasa ny rahalahiko. Fa dia voatendrin'Andriamanitra ho azy ny Tompo.
2:16 Koa ankehitriny, I mangataka anareo zavatra iray fanangonan-tsonia. Enga anie ianao tsy hampahamenatra ny tavako. "Ary hoy izy taminy, "Lazao."
2:17 Ary hoy izy:: "Miangavy aho mba hiteny ho an'i Solomona mpanjaka, fa tsy afaka mandà na inona na inona ho anao, ka mba hanomezany an'i Abisaga Sonemita ho ahy ho vadiny. "
2:18 Ary hoy Batseba:: "Tsara. Fa izaho dia hilaza amin'ny mpanjaka ny aminareo. "
2:19 Ary Batseba nankany amin'i Solomona mpanjaka, ka dia izy mba hiresaka aminy amin'ny anaran'ny Adonia. Ary ny mpanjaka nitsangana hitsena azy, ary ka hajaina azy, Ary nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany. Ary seza fiandrianana dia nijanona ho an'ny renin'ny mpanjaka, ka dia nipetraka teo an-kavanany.
2:20 Ary hoy izy taminy: "Izaho hangataka kely iray fangatahana avy aminao. Enga anie ianao tsy hampahamenatra ny tavako. "Ary hoy ny mpanjaka taminy: "Anontanio, ny reniko. Fa tsy mety fa hiala ny tavanao. "
2:21 Ary hoy izy:, "Aoka Abisaga Sonemita homena ho Adonia, rahalahinao, ho vadiny. "
2:22 Ary Solomona mpanjaka namaly, ary hoy izy tamin-dreniny: "Nahoana ianao no mangataka an'i Abisaga Sonemita ho an'i Adonia;? Nahoana raha mangataka ny fanjakana ho azy! Fa izy no zokiko lahy, ary manana Abiatara, ny mpisorona, ary Joaba, ny zanak'i Zeroia. "
2:23 Ary Solomona mpanjaka dia nianiana tamin'ny Tompo, nanao hoe:: "Enga anie Andriamanitra manao ireo zavatra ireo tamiko, ary enga anie izy manampy ireo zavatra hafa! Fa hatao maty Adonia noho izany teny izany ny fiainany.
2:24 Ary ankehitriny, Raha velona koa Jehovah, izay nanamafy ahy sy nametraka ahy eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida raiko, ary izay, araka izay nanao hoe:, dia nanao trano ho ahy: Adonia dia hatao maty anio ihany. "
2:25 Ary Solomona mpanjaka naniraka an'i Benaia, ny zanak'i Joiada, izay namono azy, ka dia maty.
2:26 koa, hoy ny mpanjaka tamin'i Abiatara, ny mpisorona: "Mandehana any Anatota, ho any amin'ny taninareo, fa Hianao no olona izay tokony hahafaty. Fa izaho kosa dia tsy hamono anao tokoa anio, satria nitondra ny fiaran'i Jehovah Tompo teo alohan'i Davida, ny raiko, ary satria efa niaritra zava-tsarotra ny zavatra rehetra, izay ny raiko niasa. "
2:27 Noho izany, Ario an'i Abiatara Solomona, ka dia tsy ho mpisorona 'ny Tompo, ka ny tenin 'ny Tompo mba hahatanteraka, izay nolazainy ny amin'ny taranak'i Ely tao Silo.
2:28 Ary ny ren'i Joaba, fa Joaba efa niodina nanaraka an'i Adonia nitanila, ka tsy nivily nanaraka Solomona. Ary noho izany, Nandositra ho any amin'ny trano-lay ny Tompo, Ary noraisiny ny tandroky ny alitara.
2:29 Ary nisy nilaza tamin'i Solomona mpanjaka fa Joaba efa lasa nandositra ho any amin'ny trano-lay ny Tompo, ary izy no eo anilan'ny alitara. Dia nirahin'i Solomona Benaia, ny zanak'i Joiada, nanao hoe:, "Mandehana, nanao azy ho faty. "
2:30 Ary Benaia nankany amin'ny trano-lay ny Tompo, ka hoy izy taminy:: "Hoy ny mpanjaka izany: 'Mivoaha.' "Fa hoy: "Tsy hivoaka. Fa tsy, Eto aho no ho faty. "Benaia nandefa teny niverina ho any amin'ny mpanjaka, nanao hoe:, "Hoy Joaba izany, Ary namaly ahy amin'izao lalana. "
2:31 Ary hoy ny mpanjaka taminy, "Ataovy araka izay nolazainy. Ary ny nanao azy ho faty, ary handevina azy. Ary toy izany koa no halainao ny ra tsy manan-tsiny, izay nalatsaka ny Joaba, avy amiko sy amin'ny taranaky ny raiko.
2:32 Ary Jehovah no hamaly ny rany eo an-dohany ihany. Fa izy roa lahy namono, marina sady tsara noho ny tenany, ary izy namono azy tamin'ny sabatra, raha ny raiko, David, tsy nahalala izany: Abner, ny zanak'i Nera, mpitarika ny miaramila ny Isiraely, ary Amasa, ny zanak'i Jatera, mpitarika ny tafiky ny Joda.
2:33 Ary ny rà dia nifotitra namely ny lohan'i Joaba, sy ny lohan'ny taranany mandrakizay ny. Fa David, sy ny taranany sy ny trano, ary ny seza fiandrianany, Hisy fiadanana anie avy amin'ny Tompo, na dia hatrany amin mandrakizay. "
2:34 Ary dia Benaia, ny zanak'i Joiada, niakatra ka, manafika azy, hamonoany Azy. Ary nalevina tao an-tranony tany an-efitra.
2:35 Ary ny mpanjaka voatendry Benaia, ny zanak'i Joiada, ao amin'ny fitoerany noho ny miaramila. Ary izy nanendry an'i Zadoka, ny mpisorona, ho solon'i Abiatara.
2:36 koa, ny mpanjaka naniraka naka an'i Simey ka niantso, ka hoy izy taminy:: "Hanao trano ho anao eto Jerosalema, ka mitoetra ao. Ary aza miala amin'izany toerana eto, na any amin'ny tany.
2:37 Fa tamin'ny andro na inona na inona no efa niala Jesosy ka nita ny lohasahan-driaka Kidrona, fantatrareo fa ianareo dia hatao maty. Ny rànao ho eo amin'ny lohanao ihany. "
2:38 Ary hoy Simey tamin'ny mpanjaka: "Ny teny tsara. Toy ny mpanjaka tompoko dia hoy, toy izany no hataon'ny mpanomponao. "Ary dia Simey nitoetra tao Jerosalema nandritra ny andro maro.
2:39 Fa izany no nitranga fa, rehefa afaka telo taona, mpanompon'i Simey, nandositra ho any amin'i Akisy, zanak'i Maka, ny mpanjakan'i Gata. Ary nisy nilaza tamin'i Simey fa efa lasa ny mpanompony ho any Gata.
2:40 Dia nitsangana Simey, ary dia nasiany lasely ny borikiny. Ary nandeha ho any amin'i Akisy tao Gata, mba hitady ny mpanompony. Ary Jesosy nitondra azy avy tany Gata.
2:41 Ary nisy nilaza tamin'i Solomona ny nialan'i Simey lasa tany Jerosalema hankany Gata, ary efa niverina.
2:42 ka naniraka, dia niantso azy, ka hoy izy taminy:: "Tsy efa mijoro ho vavolombelona aminareo avy amin'ny Tompo, ary mananatra anareo mialoha, Ary amin'ny andro na inona na inona, dia lasa nandeha, mivoaka ho eto na ny any, fantatro fa ho faty?'Ary namaly ahy, 'Ny teny izay efa reko tsara.'
2:43 Ary nahoana ianao no tsy nitandrina ny fianianana tamin'ny Tompo, sy ny didy izay nandidy anareo?"
2:44 Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Simey: "Hianao mahalala ny ratsy rehetra, izay mahalala ny fo, izay nataonao tamin'i Davida, ny raiko. Ny Tompo dia namaly ny ratsy eo lohanao ihany. "
2:45 Ary Solomona mpanjaka dia hotahina, ary ny seza fiandrianan'i Davida hampitoerina eo anatrehan'i Jehovah, eny, mandrakizay.
2:46 Ary toy izany ny mpanjaka nandidy an'i Benaia, ny zanak'i Joiada. Ary nivoaka, dia namono azy, dia maty izy.
1 Mpanjaka 3
3:1 Ary toy izany ny fanjakana dia nanamafy an-tànan'i Solomona, ary izy no niaraka tamin'i Farao, ny mpanjakan'i Egypta, ny vinanton'i. Fa dia naka ny zanany vavy, dia nitondra azy ho any an-Tanànan'i Davida, mandra-vita ny fanorenana an-tranony, sy ny tranon'i Jehovah, ary ny màndan'i Jerosalema manodidina.
3:2 Fa ny olona mbola sorona teny amin'ny fitoerana avo. Fa tsy misy tempoly efa naorina ho an'ny anaran'i Jehovah, na dia amin'izany andro izany.
3:3 Ary Solomona tia an'i Jehovah, mandeha araka ny didy Davida, ny rainy, afa-tsy ny sorona teny amin'ny fitoerana avo, Ary nandoro ditin-kazo manitra.
3:4 Ary noho izany, dia lasa nankany Gibeona, ka mba immolate any; fa izany ilay fitoerana avo lehibe indrindra. Solomona nanatitra fanatitra teo ambonin'ny alitara izay, tao Gibeona, iray tra-boina toy dorana arivo.
3:5 Ary Jehovah niseho tamin'i Solomona, amin'ny alalan'ny nofy amin'ny alina, nanao hoe:, "Angataho izay tianao, ka mba hanome azy ho anao. "
3:6 Dia hoy Solomona: "Hianao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'i Davida mpanomponao, ny raiko, satria nandeha tamin'ny imasonao ny fahamarinana sy ny rariny, ary amin'ny fo mahitsy eo anatrehanao. Ary Hianao efa nitahiry ny famindram-po lehibe ho azy, ary efa nanomezanao azy zanakalahy hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany, tahaka ny amin'izao anio izao.
3:7 Ary ankehitriny, Andriamanitra Tompo ô, efa nahatonga ny mpanomponao nanjaka nandimby an'i Davida, ny raiko. Ary izaho dia ankizy kely, ary izaho tsy mahalala ny fidirana sy ny lasa.
3:8 Ary ny mpanomponao dia eo afovoan'ny ny olona izay natokanareo, ny goavam-be ny olona, izay tsy afaka ny ho azo isaina izy na isaina noho ny hamaroany.
3:9 Noho izany, omeo ny mpanomponao ny fo mora ampianarina, ka mba ho afaka mitsara ny olonao, ary ny tsi-fitovian'ny tsara sy ny ratsy. Fa iza no ho afaka hitsara ity vahoaka ity, ny olonao, izay maro?"
3:10 Ary ny Teny dia ankasitrahana eo anatrehan'i Jehovah, fa Solomona nangataka izany zavatra izany karazana.
3:11 Ary hoy Jehovah tamin'i Solomona: "Koa satria efa nangataka izany teny izany, ka tsy nangataka andro maro na harena ho anao, na ny ain'ny fahavalonao, fa raha tokony efa nangataka ho anao mba fahendrena hamantatra fitsarana:
3:12 indro, Efa nanao ho anareo araka ny teninareo, ary efa nanome anao saina hendry sady mahiratra, loatra ka tsy nisy tsy nisy tahaka anao ny teo alohanao, na izay hitsangana handimby anareo.
3:13 Fa koa noho ny zavatra izay tsy manontany, Efa nomeko ho anao, izany hoe ny harena sy ny voninahitra, ka dia tsy nisy tahaka anao tao amin'ny mpanjaka tao amin'ny andro rehetra talohan'ny.
3:14 Ary raha handeha amin'ny lalako, ka mitandrina ny didinao sy ny didiko, toy ny efa nalehan, I ho ela velona ianao. "
3:15 Dia nahatsiaro Solomona, ka fantany fa nofy. Ary rehefa tonga tany Jerosalema, dia nitsangana teo anoloan'ny fiaran'ny faneken'i Jehovah, ka nanatitra fanatitra dorana sy nanao iharan'ny-pihavanana, Ary nanao fanasana lehibe ho an'ny mpanompony rehetra.
3:16 Avy eo vehivavy vehivavy janga roa nankao amin'ny mpanjaka, ka dia nitoetra teo anatrehany izy.
3:17 Ary ny anankiray tamin'ireo no nanao hoe: "Miangavy anao aho, tompoko, Izaho sy ity vehivavy ity nonina tany an-trano iray, ary niteraka, aminy ao amin'ny efitrano.
3:18 Avy eo, tamin'ny andro fahatelo taorian'ny niteraka, izy koa dia niteraka. Ary izahay dia miara-, tsy misy olon-kafa tao aminay tao an-trano, afa-tsy ny roa izahay.
3:19 Dia vehivavy ity, zanak'i maty tamin'ny alina ny. Fa raha matory, dia tavela izy.
3:20 Ary nitsangana teo amin'ny mangina lalina amin'ny alina, izy naka ny zanako teo anilako, raha mbola, ny ankizivavinao, natory, dia nametraka azy teo an-tratrany. Avy eo dia nametraka ny fatin'ny zanany lahy tato an-tratrako.
3:21 Ary rehefa efa nitsangana maraina, ka mba hanome ronono ny zanako, dia niseho ny maty. Fa nandinika azy tsara kokoa amin'ny fahazavan'ny andro, Takatro fa efa tsy Ahy, izay efa teraka. "
3:22 Ary namaly kosa ilay anankiray: "Tsy toy ny lazainao. Fa tsy, Efa maty ny zanakao, fa ny ahy fa velona. "To kosa, hoy izy: "Mandainga ianao. Fa ny lahy fiainana, ary ny zanakao no maty. "ary izany no fomba, dia nifanditra teo anatrehan'ny mpanjaka.
3:23 Ary hoy ny mpanjaka: "Io hoy ny anankiray:, 'Ny zanako lahy fa velona, ary ny zanakao no maty. 'Ary mamaly ny hafa, 'Tsia, fa ny zanakao no maty, fa velona ahy. ' "
3:24 Koa hoy ny mpanjaka:, "Itondray sabatra aho." Ary rehefa nentiny ny sabatra ho eo anatrehan'ny mpanjaka,
3:25 hoy izy:, "Zarao ny zaza velona amin'ny faritra roa, ka omeo ny antsasaky ny fehin'i ho an'ny olona sy ny antsasaky ny fehin'i ho an'ny hafa. "
3:26 Fa ny vehivavy, renin'ny zaza velona, hoy izy tamin'ny mpanjaka, fa ny fony dia nihorakoraka ny amin'ny zanany, "Miangavy anao aho, tompoko, manome ny zaza velona ho azy, ary aza mamono azy. "To kosa, ny anankiray kosa hoe:, "Aoka tsy ho ahy, na ho anao, fa zarao mihitsy. "
3:27 Ary ny mpanjaka namaly ka nanao hoe:: "Omeo zaza velona ho vehivavy ity, ka tsy hamono azy. Fa izy no reniny. "
3:28 Ary raha ren'ny Isiraely rehetra momba ny fitsarana ny mpanjaka efa notsaraina, dia natahotra ny mpanjaka, nahita fa misy fahendren'Andriamanitra ao aminy Andriamanitra mba hanatanteraka didim-pitsarana.
1 Mpanjaka 4
4:1 Ary Solomona mpanjaka no nanjaka tany amin'ny Isiraely rehetra.
4:2 Ary izao no mpitarika izay nananany: Azaria, , zanak'i Zadoka,, ny mpisorona;
4:3 Elihoreph sy Ahia, ny taranak'i Shisha, ny mpanora-dalàna; Josafata, ny zanak'i Ahiloda, ny mpitahiry rakitsoratra;
4:4 Benaia, ny zanak'i Joiada, mpifehy ny miaramila; ary Zadoka, sy Abiatara, mpisorona;
4:5 Azaria, ny zanak'i Natana,, noho ireo manampy ny mpanjaka; Zabud, ny zanak'i Natana,, ny mpisorona, ny sakaizan'ny mpanjaka;
4:6 ary Ahishar, voalohany mpanapaka ny tranon'Andriamanitra; ary Adonirama, ny zanak'i Abda, noho ny fanompoana.
4:7 Ary Solomona nanendry roa ambin'ny folo lahy mpifehy ny Isiraely rehetra, dia nitondra fanatitra isan-taona fandaharana ho an'ny mpanjaka sy ny ankohonany. Fa samy nanompo izay ilaina eo, amin'ny isam-bolana ny taona.
4:8 Ary izao no anarany: Benhur, tao amin'ny tany havoan'i Efraima;
4:9 Get ny fuck dia, tao Makaza, sy tao Salbima, sy Beti-semesy, ary in Elon, sy Beti-hanana;
4:10 Benhesed, in Arobota: ny i Soko sy ny tany Hefera rehetra;
4:11 Benabinadab, izay efa rehetra Naphath-Dora, izay nanana Taphath, , zanakavavin'i Solomona, ho vadiny;
4:12 Baana, ny zanak'i Ahiloda, izay nanjaka tao Tanaka, sy Megido, ary Beti-sana rehetra, izay eo anilan'i Zaretana sy ambany Jezirela, avy any Beti-sana ka hatrany Abela-mehola, tandrifin'i Jokmeam;
4:13 azy dia momba, in Ramota-gileada, izay nanana ny tanàna Jaira, , zanak'i Manase,, in Gileada; io no aloha teo amin'ny tany Argoba rehetra, izay any Basana, enim-polo lehibe nisy manda varahina izay nanana trano fisotroana;
4:14 Ahinadab, ny zanak'i Ido, izay voalohany tany Mahanaima;
4:15 Ahimaza, in Naftaly, ary izy koa nanana Basemata, , zanakavavin'i Solomona, amin'ny fanambadiana;
4:16 Baana, ny zanak'i Hosay, in Asera sy Bealoth;
4:17 Josafata, ny zanak'i Paroa, tany Isakara;
4:18 Simey, ny zanak'i Ela, in Benjamin;
4:19 mpanome, ny zanak'i Ory, any amin'ny tany Gileada, ao amin'ny tanin'i Sihona, mpanjakan'ny Amorita, sy ny ary, mpanjakan'i Basana, rehetra izay teo amin'izany tany.
4:20 Joda sy ny Isiraely dia tsy hita isa, tahaka ny fasika any an-dranomasina ny hamarony: mihinana sy misotro, ary faly.
4:21 Ary Solomona nanana, ny fanjakany, rehetra ny fanjakana, hatramin'ny Ony ka hatramin'ny tanin'ny Filistina, hatramin'ny sisin'i Egypta. Ary dia nanatitra fanomezana ho azy, ka dia nanompo azy tamin'ny andro rehetra niainany.
4:22 Ary ny fepetra voalazan'ny Solomona, ho an'ny andro tsirairay, dia telo-polo kora avy Lafarinina varimbazaha tsara toto, ary enim-polo Kor koba,
4:23 omby mifahy folo, ary roa-polo omby avy any amin'ny kijana, ary ondrilahy zato, ankoatra ny nankafy ny stags, gazela serfa, sy ny gazela, ary akoho amam-borona matavy.
4:24 Fa efa nahazo ny faritra manontolo izay any an-dafin'ny ony, avy any Tifsa ka hatrany Gaza, ary ny mpanjaka rehetra ireo faritra. Ary nanana fiadanana manodidina manodidina.
4:25 Ary noho izany, Joda sy ny Isiraely dia miaina tsy misy tahotra, samy eo ambany ny voalobony sy eo ambanin'ny aviavy ny hazo, hatrany Dana ka hatrany Beri-sheba, nandritra ny andro rehetra niainan'i Solomona.
4:26 Ary Solomona nanana tsoavaly efatra alina ny soavalin-kalesy, ary roa arivo amby iray mitaingina soavaly.
4:27 Ary ny voalaza etsy ambony mpifehy ny mpanjaka nitaiza ireo. Ary izy ireo koa dia nanatitra izay ilaina eo amin'ny latabatr'i Solomona mpanjaka, miaraka amin'ny fahazotoana be, samy amin'ny fotoana.
4:28 koa, dia nitondra vary hordea sy ny mololo ho an'ny soavaly sy ny biby mpitondra entana, dia teo amin'ny tany izay ny mpanjaka, fotsiny araka izay voatendry ho azy ireo.
4:29 Ary Andriamanitra nanome an'i Solomona fahendrena, ary lehibe izaitsizy tokoa ny fisainana, ary ny fo malalaka, tahaka ny fasika izay teo amoron'ny ranomasina.
4:30 Ary ny fahendren'i Solomona nihoatra noho ny fahendren'ny rehetra Atsinanana, ary ny Egyptiana.
4:31 Ary izy hendry noho ny olona rehetra: hendry noho Ethan, Ezrahita, sy Hemana, sy Kalkola, ary Darda, ny taranak'i Mahol. Ary nalaza tany amin'ny firenena rehetra manodidina.
4:32 Solomona koa dia nilaza fanoharana telo arivo. Ary ny andininy dia arivo sy dimy.
4:33 Ary dia nitori momba ny hazo, avy amin'ny sedera izay ao Libanona, ny hysopa izay maniry avy teo amin'ny màndan'i. Ary nanazava momba ny biby, ary ny vorona, ary ny biby mandady, sy ny trondro.
4:34 Ary tonga avy tany amin'ny firenena rehetra mba hihaino ny fahendren'i Solomona, sy ny mpanjaka rehetra amin'ny tany, izay nandre momba ny fahendreny.
1 Mpanjaka 5
5:1 Hiram, ny mpanjakan'i Tyro, koa naniraka ny mpanompony ho any amin'i Solomona. Fa nandre fa efa voahosotra ho mpanjaka handimby an-drainy. Ary Hirama efa namana tamin'i Davida ny fotoana manontolo.
5:2 Ary Solomona naniraka tany amin'i Hirama, nanao hoe::
5:3 "Fantatrareo ny sitrapon'ny Raiko Davida, ary izy tsy afaka ny hanorina trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamaniny, noho ny ady izay antomotra manodidina azy, mandra-pahatongan'ny Tompo nametraka azy eo ambanin'ny diany ny tongony.
5:4 Fa ankehitriny Jehovah Andriamanitro efa nanome ahy fitsaharana amin'ny manodidina. Ary tsy misy fahavalo, na ny loza manjo intsony.
5:5 Izany no antony, I mikasa ny hanorina tempoly ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitro, araka Jehovah niteny tamin'i Davida raiko, nanao hoe:: 'Ny zanakao, izay hapetrako ao an-toerana, eo amin'ny seza fiandriananao, izy no hanao ny trano ho an'ny anarako. '
5:6 Noho izany, mba mpanomponao mba kapaina ho ahy Sedera avy any Libanona. Ary aoka ny mpanompoko hiaraka amin'ny mpanomponao. Dia homeko ho anao, fa ny karaman'ny mpanomponao, na inona na inona hanontany. Fa fantatrao fa tsy misy olona ao amin'ny oloko izay mahafantatra ny fomba hikapa hazo ary koa ny Sidoniana. "
5:7 Noho izany, rehefa nandre Hirama ny tenin'i Solomona, dia faly indrindra izy, ka hoy Izy:, "Isaorana anie ny Tompo Andriamanitry androany, izay nanome an'i Davida zanaka hendry indrindra noho ity vahoaka maro be!"
5:8 Ary Hirama naniraka tany amin'i Solomona, nanao hoe:: "Efa reko ny zavatra izay ka nanomezany ho ahy. Ary Izaho hanao ny sitrapony rehetra momba ny hazo sedera sy ny hazo kesika.
5:9 Ny vahoakako hitondra azy midina avy any Libanona ho any amin'ny ranomasina. Ary Izaho mandamina azy ireo ho toy rafts teny ambonin'ny ranomasina, hatrany amin'ny toerana ianao dia hidika ho ahy. Ary Izaho tanety azy teo, ary ianao haka azy. Ary izao no atero ho ahy izay ilaina mba hanome sakafo any an-tranoko. "
5:10 Ary noho izany, Hiram nanome an'i Solomona hazo sedera sy ny hazo kesika, araka ny sitrapony rehetra.
5:11 Ary tamin'izany Solomona nanatitra an'i Hirama roa alina kora ny vary, toy ny sakafo ho an'ny an-tranony, ary roa-polo kora avy amin'ny solika madio indrindra. Izany zavatra izany no nomen'i Solomona ho toy ny hetra ho an'i Hirama isan-taona.
5:12 Ary Jehovah nanome fahendrena an'i Solomona, araka izay nanao taminy hoe:. Ary nihavana Hirama sy Solomona, ary ny roa namely ny fifanarahana.
5:13 Ary Solomona mpanjaka nifidy ny mpiasa rehetra amin'ny Isiraely, ary ny voantso ho telo alina dia ny lahy.
5:14 Ary dia nasainy nankany Libanona, iray alina isam-bolana, in mifandimby, ka nandritra ny roa volana izy ireo tao an-tranony. Ary Adonirama, no mpifehy io karazana voantso ho.
5:15 Ary Solomona nanana fito alina ny olona izay nitondra enta-mavesatra, ary ny valo alina izay nanapaka vato avy any an-tendrombohitra,
5:16 ankoatra ny mpifehy, izay nifehy ny asa tsirairay, isa telo arivo sy telon-jato, izay nanome baiko ny amin'ny olona Isiraely sy ireo izay nanao ny asa.
5:17 Ary ny mpanjaka nandidy azy ireo mba hitondra vato lehibe, vato sarobidy, fa ny fototry ny tempoly, ary ny Kianja azy ireo.
5:18 Ary izao no miendrika ny stoneworkers Solomona sy Hirama ny stoneworkers. Ary ny mponina tao Gebala koa namboatra ny hazo sy ny vato, mba hanao ny trano.
1 Mpanjaka 6
6:1 Avy eo dia nitranga fa, ao amin'ny eightieth amby efa-jato taona taorian'ny zanak'Israely niala avy any amin'ny tany Egypta, tamin'ny taona fahefatra nanjakan'i 'ny fitondran' i Solomona ny Isiraely, tamin'ny volana ZIVA, izay volana faharoa, ny tranon'i Jehovah nanomboka haorina.
6:2 Ary ny trano, izay nanorina Solomona mpanjaka ho an'ny Tompo, dia enim-polo hakiho ny lavany, roa-polo hakiho ny sakany, ary telo-polo hakiho ny hahavony.
6:3 Ary ny lavarangana fidirana teo anoloan'ny tempoly, roa-polo hakiho ny lavany, araka ny ohatry ny sakan'ny tempoly. Ary nisy folo hakiho ny sakany eo anatrehan'i ny tempoly.
6:4 Ary nanao oblique varavarankely tao amin'ny tempoly.
6:5 Ary teo ambonin'ny manda ny tempoly, Fa nanao kobany amin'ny lafiny rehetra, eo amin'ny rindrin'ny trano manodidina ny tempoly sy ny efitra anatiny. Ary nanao ny efi-trano lafiny manodidina.
6:6 Ny Flooring eo amin'ny ambaratonga ambany natao dimy hakiho ny sakany, ary ny gorodona afovoany dia enina hakiho ny sakany, ary ny fahatelo fito hakiho rihana natao ny sakany. Avy eo dia napetraka rairainy teo amin'ny trano ny ivelany manodidina, toy izany fa izy ireo dia tsy hisy hitsatoka amin'ny rindrin'ny tempoly.
6:7 Ary ny trano, raha dia natsangana, no nanaovana vato voapaika sy vita. Ary noho izany, tsy Mallet, na fandraka, na fitaovana vy re tao an-trano raha dia natsangana.
6:8 Ny varavarana teo anilan'ny afovoany dia ny fizarana ny zon'ny an-trano. Ary izy ireo dia miakatra tohatra miolikolika eny amin'ny ambaratonga afovoany, ka hatreo afovoan'ny sehatra ho any amin'ny ambaratonga fahatelo.
6:9 Fa nanao ny trano, ka dia vitany. Ary nopetahany takela-bolamena ny trano dia nopetahany hazo sedera.
6:10 Fa nanao ny paneling teo ambonin'ny trano manontolo, dimy hakiho ny haavony, ary nandrakotra ny trano amin'ny hazo sedera.
6:11 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'i Solomona, nanao hoe::
6:12 "Ny amin'ity trano, izay no manorina: raha handeha manaraka ny lalako didinao, ary hanatanteraka ny fitsipiko, ary tandremo ny didiko rehetra, mandroso ireny, No hanamafy ny teniko aminao, izay nolazaiko tamin'i Davida rainao.
6:13 Ary Izaho mitoetra eo amin'ny Zanak'Isiraely, ary tsy hahafoy ny Isiraely oloko. "
6:14 Ary noho izany, Solomona ny trano, ka dia vitany.
6:15 Fa nanao ny rindrin'ny trano, ny anatiny, amin'ny tontonana ny sedera, avy amin'ny gorodona-trano, ho any an-tampon'ny rindrina, ary hatrany amin 'ny valindrihana. Dia norakofany hazo sedera ny anatiny. Ary nopetahany takela-bolamena ny gorodona izy ny trano amin'ny tontonana ny kesika.
6:16 Fa nanao kobany sedera, roa-polo hakiho, amin'ny ampahany indray ny tempoly, hatramin'ny tany ka hatrany an-tampon'ny. Ary nanao ny trano anatiny amin'ny efitra anatiny ho toy ny Masina Indrindra.
6:17 Ary ny tempoly mihitsy, eo am-baravarana amin'ny efitra anatiny, dia efa-polo hakiho.
6:18 Ary ny trano manontolo nitafy lamba hazo sedera ny anatiny, manana ny turnings sy ny tranga noforonina tamin-kafetsena nanao, miaraka amin'ny sary sokitra projecting ivelany. Ny zava-drehetra niakanjo tontonana ny sedera. Ary tsy nisy vato mihitsy dia afaka ho hita ao amin'ny rindrina.
6:19 Ary izy nanao ny efitra anatiny ao amin'ny afovoan-trano, ao amin'ny efitra anatiny, ka dia mety toby ny fiaran'ny faneken'i Jehovah dia.
6:20 Ary ny efitra anatiny roa-polo hakiho natao ny lavany, roa-polo hakiho ny sakany, ary roa-polo hakiho ny hahavony. Dia nandrakotra ka nampiakanjo azy ny tena volamena tsara. Avy eo, koa, dia niakanjo ny alitara amin'ny hazo sedera.
6:21 koa, ny trano eo anoloan'ny efitra anatiny, dia rakotra ny tena volamena tsara, ary nohomboany ireo takelaka tamin'ny hombo volamena.
6:22 Ary tsy nisy na inona na inona ao amin'ny tempoly izay tsy rakotra volamena. Koa, ny alitara manontolo amin'ny efitra anatiny dia nopetahany takela-bolamena avokoa.
6:23 Ary nanao tao amin'ny efitra anatiny kerobima roa avy amin'ny hazo 'ny hazo oliva, folo hakiho ny hahavony.
6:24 Ny elatry ny kerobima dia dimy hakiho, ary ny elany ny kerobima dia dimy hakiho, izany hoe, manana folo hakiho avy ny tampon'i ny elatry hatramin'ny tampon'i ny elany.
6:25 Toy izany koa, ny faharoa kerobima iray koa folo hakiho. Sy izay ohatry dia mitovy sy ny asa iray, ao amin'ny kerobima roa,
6:26 izany hoe, kerobima iray nanana haavon'ny folo hakiho, ary toy izany koa ny kerobima anankiray faharoa.
6:27 Ary nametraka ny kerobima eo afovoan'ny ny tempoly ao anaty. Ary ny kerobima ny elany mivelatra, ary ny elatry ny anankiray dia mikasika ny rindrina, ary ny elatry ny kerobima faharoa dia mikasika ny manda hafa. Fa ny zava-elatra, eo afovoan'ny ny tempoly, dia mikasika samy hafa.
6:28 Ary nopetahany takela-bolamena koa ny kerobima-bolamena.
6:29 Ary ny rindrin'ny tempoly rehetra manodidina nosoratany nasiany sarin'ny tamin'ny sary sokitra sy ny samy hafa turnings. Ary nanao azy ireo kerobima, nisy sarin'ny hazo rofia, sy ny sary isan-karazany, toy ny hoe izao no projecting avy, ary raha miala, ny rindrina.
6:30 Avy eo, koa, ny gorodona-trano dia nopetahany takela-bolamena anatiny sy teo ivelany.
6:31 Ary teo amin'ny fidirana amin'ny efitra anatiny, nanao varavarana kely, avy amin'ny hazo 'ny hazo oliva, amin'ny tolam-dimy zorony.
6:32 Ary nisy lela-varavarana roa, avy amin'ny hazo 'ny hazo oliva. Ary dia nosoratany nasiany sarin'ny kerobima, ary sary be rofia, ary tena malaza tarehimarika. Ary nopetahany takela-bolamena ireo. Ary nandrakotra ny kerobima, ary koa ny hazo rofia sy ny zavatra hafa, -bolamena.
6:33 Ary nanao, teo amin'ny fidirana amin'ny tempoly, Lahatsoratra avy amin'ny hazo 'ny hazo oliva, amin'ny zorony efatra,
6:34 ary ny lela-varavarana roa, avy amin'ny hazo ny hazo kesika, tany an-dafin'i. Ary isaky ny varavarana dia avo roa heny, ary dia toy izany no nanokatra ny famoretana teo mihitsy.
6:35 Ary nosoratany nasiany sarin'ny kerobima, nisy sarin'ny hazo rofia, ary tena malaza soratra voasokitra. Ary nandrakotra ny zava-drehetra amin'ny takelaka volamena, niasa mba ho tafakambana tsara joro.
6:36 Ary nanao ny anatiny atrium telo andalana voalambolambo vato, ary iray andalana ny hazo sedera.
6:37 Tamin'ny taona fahefatra nanjakan'i, ny tranon'i Jehovah dia naorina, tamin'ny volana ZIVA.
6:38 Ary tamin'ny taona fahiraika ambin'ny folo, tamin'ny volana BUL, izay volana fahavalo, ny trano rehetra vita tsara ny asa sy ny fitaovana rehetra. Fa nanao izany mandritra ny fito taona.
1 Mpanjaka 7
7:1 Ary Solomona nanao ny trano ho an'ny telo ambin'ny folo taona, ary dia nitondra azy ho lavorary.
7:2 Fa nanao ny trano avy Alan'i Libanona: ka zato hakiho ny lavany, ary dimam-polo hakiho ny sakany, ary telo-polo hakiho ny hahavony, efatra walkways eo amin'ny andry hazo sedera. Fa efa nolavahany ny hazo sedera ho andry.
7:3 Ary niakanjo ny fijangajangana manontolo efitrano tontonana ny sedera. Ary nisy tohanan'ny andry dimy amby efa-polo. Ary laharana iray natao andry dimy ambin'ny folo,
7:4 napetraka tsirairay mifanohitra hafa,
7:5 ary nanatrika ny hafa, miaraka amin'ny mitovy Heba eo amin'ny andry. Ary hatreo ambonin'ny andry nisy rairainy-joro mitovy amin'ny zavatra rehetra.
7:6 Ary nanao ny lavarangana fidirana amin'ny andry, dimam-polo hakiho ny lavany, ary telo-polo hakiho ny sakany, ary ny iray hafa lavarangana fidirana, miatrika ny lavarangana fidirana lehibe kokoa, miaraka amin'ny andry sy ny crossbeams ambonin'ny andry.
7:7 Ary koa ny lavarangana fidirana amin'ny seza fiandrianana, izay misy ny fitsarana. Ary nopetahany takela-hazo sedera, avy amin'ny tany ka hatrany amin'ny fihaonambe.
7:8 Ary tamin 'ny afovoan' ny lavarangana fidirana, nisy trano kely, izay izy fa mipetraka ao amin'ny fitsarana, toy izany koa amin'ny hafa. Izy koa nanao trano ho an'ny zanakavavin'i Farao (Solomona izay efa nampakariny ho vady) ny asa izany sy ny karazana tahaka izany lavarangana fidirana.
7:9 Rehetra dia ny vato soa, izay efa tapatapahina amin'ny antsy iray fitsipika sy ny fepetra manokana, betsaka ao anatiny toy izay tsy manana, hatry ny fanorenana ka hatrany ny tampon'i ny rindrina, ary any ivelany hatramin'ny lehibe atrium.
7:10 Ary ny fanorenan'ny natao tamin'ny vato soa: vato lehibe ny valo na folo hakiho.
7:11 Ary noho izany, nisy vato soa, ny fepetra mitovy, izay efa nanapaka amin'ny fomba mitovy amin'ny hazo fisaka sedera.
7:12 Ary ny lehibe dia boribory atrium, amin'ny voapaika telo andalana vato ary iray andalana ny hazo sedera voapaika, koa araka izay tao an-anatiny atrium ny tranon'i Jehovah, ary amin'ny lavarangana fidirana amin'ny trano.
7:13 Ary Solomona mpanjaka naniraka ka nitondra Hirama Tyro,
7:14 ny zanaky ny vehivavy mpitondratena, avy tamin'ny firenen'i Naftaly, izay rainy ny avy any Tyro, ny mpanao asa tanana varahina, ary feno fahendrena, sy fahiratan-tsaina, sy fahalalana, mba hamorona asa varahina rehetra. Ary nony efa lasa ho any amin'i Solomona mpanjaka, dia nanao ny asany rehetra.
7:15 Ary nony natsipiny andry varahina roa. Andry tsirairay dia valo ambin'ny folo hakiho ny haavony, ary roa ambin'ny folo hakiho nanodidina andry roa.
7:16 koa, nanao an-idina roa lohan'ny varahina, izay ho hatao eo amin'ny tampon'ny ny andry: lohany iray dia dimy hakiho ny haavony, ary ny anankiray dia dimy hakiho lohany ny hahavony.
7:17 Ary nisy zavatra toy ny tambajotra ny gadra, notenomina miaraka amin'ny fomba tena tsara. Samy lohan'ny andry dia natsipy, ary fito andalana nanerana harato kely iray loha, ary harato kely fito teny an-hafa lohany.
7:18 Dia vita ny andry roa andalana manodidina isaky ny tambajotra, ka dia nanarona ny lohany ireo, izay teo amin'ny tampon'ny, amin'ny ampongabendanitra. Ary nanao toy izany koa ny faharoa loha.
7:19 Ary ny lohany izay teo amin'ny tampon'ny andry, ao amin'ny lavarangana fidirana efatra hakiho, efa noforonina tamin'ny asa lilia.
7:20 Ary indray, nisy hafa lohany amin'ny tampon'ny andry ambony, araka ny ohatry ny andry tandrifin'ny netting. Ary nisy roan-jato ny ampongaben-danitra, nifanandalana nanodidina ny loha faharoa.
7:21 Ary nametraka ny andry roa teo amin'ny lavarangana fidirana amin'ny tempoly. Ary rehefa nametraka ny andry eo ankavanana, ny anarany nataony hoe Jakina. Toy izany koa, dia nanangana ny andry faharoa, ka dia nataony hoe Boaza ny anarany.
7:22 Ary ambony noho ny tampon 'ny andry, ny mpanjaka nametraka ny asa ny fanaon'ny lilia. Ary ny asan 'ny andry vita tsara.
7:23 Izy koa nanao an-idina ranomasina, folo hakiho no molony ny molotry, boribory eo amin'ny lafiny rehetra. Ny hahavony dimy hakiho, ary ny tady manify ny telo-polo hakiho nofonosiny manodidina.
7:24 Ary nisy sculpted asa eo ambanin'ny molony nanodidina azy folo amin'ny iray hakiho manodidina ny ranomasina mandeha. Nisy roa andalana nanary ny striated sary sokitra.
7:25 Ary nitsangana teo ambonin'ny omby roa ambin'ny folo, ny ireo telo ireo no nanatrika ny avaratra, ary ny telo nanatrika ny andrefana, ary ny telo nanatrika ny atsimo, ary ny telo nanatrika ny atsinanana. Ary ny ranomasina dia teo amboniny ambony. Ary ny posteriors dia nafenina tanteraka ao anatin'ny.
7:26 Ary ny tavy dia ny hatevin'ny telo twelfths. Ary ny molony dia tahaka ny molotry ny chalice, na toy ny outturned petal lilia. Tsy nahalany roa arivo bata.
7:27 Ary nanao faladia varahina folo: isan-tavin-drano dia efatra hakiho ny lavany, ary efatra hakiho ny sakany, ary telo hakiho ny hahavony.
7:28 Ary ny asa mihitsy ny fitoeran-tavin dia voasokitra; ary nisy sary sokitra eo amin'ny tranga.
7:29 Ary ny teo anelanelan'ny satroboninahitra kely sy ny sisiny, dia nisy sarin-diona, sy omby, ary ny kerobima; ary koa ao amin'ny tranga ambony. Ary ambanin'ny sarin-diona sy omby nisy zavatra toy ny famatoran 'ny varahina nihantona teo.
7:30 Ary ny tavin-drano samy nisy kodia efatra, amin'ny axels varahina. Ary tamin'ny lafiny efatra kely dia zavatra toy ny fitaovam-piadiana, ambanin'ny ario tavy, miatrika lavitra iray hafa.
7:31 koa, ny vavan 'ny afovoan-koveta tao an-tampon-doha. Ary inona no hita maso ivelany dia iray hakiho manodidina, ary tanteraka izany nisy iray hakiho sy sasany. Ary isaky ny zorony dia isan-karazany ny andry soratra voasokitra. Ary ny toerana teo anelanelan'ny andry natao efajoro, fa tsy boribory.
7:32 Ary ny kodia efatra, izay teo am-zorony efatra amin'ny fototra, vao nanampy ho iray hafa ambanin'ny tavin-drano. Ny haavon'ny nisy kodia iray avy natao iray hakiho sy sasany.
7:33 Ireto avy ny karazam-kodia hanary izay matetika no natao ho an'ny kalesy. Ary ny axels, ary ny rayons, ary ny kodiarana, sy ny toerana rehetra ario.
7:34 Ary ny fitaovam-piadiana kely efatra, izay amin'ny zorony tsirairay ny lehilahy iray tena ratsy, dia natsipy ary tafakambana toy ny ampahany amin'ny toby miaramila mihitsy.
7:35 Ary teo am-tampon'i ny fototra, nisy boribory hijoro ny antsasaky ny hakiho iray, noforonina mba ny tavy azo apetraka aminy, manana ny soratra voasokitra, ary isan-karazany ny sary sokitra ny azy.
7:36 Koa izy ireo takelaka voasokitra, izay dia nataony varahina. Ary tamin'ny zorony ireo kerobima, ary ny liona, nisy sarin'ny hazo rofia, nitsangana avy, toy ny hoe, naka ny endriky ny olona, ka toa tsy ho voasokitra, fa napetraka mifanila amin'ny lafiny rehetra.
7:37 Izany no fomba, nanao faladia folo tamin'ny mitovy fanariana sy ny ohatra, ary tena mitovy soratra voasokitra.
7:38 Koa izy nanao tavin-drano folo varahina tanana. Tanana iray ahitana efatra kovetabe fandroana, ary efatra hakiho. Ary koveta tsirairay dia hapetrako eo ambonin'ny lehilahy iray tena ratsy, izay folo ny faladiany.
7:39 Ary nametraka ny fitoeran-tavin folo, dimy ho amin'ny ankavanan'ny tempoly, ary dimy ho amin'ny ankavia. Ary ny ranomasina dia napetrany ho amin'ny ankavanan'ny tempoly, tandrifin'ny atsinanana, manatrika ny atsimo.
7:40 Ary Hirama nanao vilany, ary trays, ary ny fihantonana kely. Ary vita ny asa rehetra Solomona mpanjaka ho amin'ny tranon'i Jehovah:
7:41 ny andry roa, ary ny roa ny tady ny lohandohany teo amin'ny tampon'ny andry, sy ny harato roa, izay nandrakotra ny mahazaka roa izay teo ambonin'ny tampon'ny andry;
7:42 ary ny sarin'ampongabendanitra efa-jato ho amin'ny harato roa, roa turnings ho amin'ny harato ho an'ny harato tsirairay, mba handrakotra ny famatorana nataon'ny lohany, izay teo ambonin'ny tampon'ny andry;
7:43 ary ny folo ny faladiany, ary ny tavin-drano folo ho eo ambonin'ny fitoerany;
7:44 ary ny iray ranomasina, sy ny sarin'omby roa ambin'ny folo teo ambanin'ny ranomasina;
7:45 ary ny vilany, ary ny trays, ary ny fihantonany kely. Ny zavatra rehetra izay nataon'i Hirama ho an'i Solomona mpanjaka, ho an'ny tranon'i Jehovah, dia nataony varahina volamena.
7:46 Ao amin'ny faritra misokatra akaikin'i Jordana, ny mpanjaka an-idina ireo, tany tamin'ny tanimanga teo anelanelan'i Sokota sy Zaretana.
7:47 Ary Solomona napetraka ny zavatra rehetra. Fa noho ny be dia be izaitsizy tokoa, ny varahina tsy nilanja.
7:48 Ary Solomona nanao ny fanaka rehetra momba ny tranon'i Jehovah: ny alitara volamena, sy ny latabatra volamena, amin 'izay ny mofo aseho dia hapetraka;
7:49 ary ny fanaovan-jiro volamena, dimy ho amin'ny ankavanana, ary dimy ho amin'ny ankavia, tandrifin'ny efitra anatiny, dia samy volamena tsara; sy ny endriky ny vonin'ny lilia, amin'ny jiro ambony ireo, volamena; ary ny hetin-jiro volamena;
7:50 vilaniny fandraofan-davenona sy ny rano, ary kely fitrebika, ary ny vilia baolina, ary kely tafondro, ary ny fitondran'afony, ny tena volamena tsara; ary ny savily ny varavarana, fa ny anaty trano ny Masina Indrindra sy ny varavaran'ny tranon'i ny tempoly, izay volamena.
7:51 Ary Solomona tonga lafatra ny asa rehetra izay nataony tao an-tranon'i Jehovah. Ary dia nampidiriny tao ny zavatra izay Davida rainy efa nohamasinina: ny vola, ary ny volamena, ary ny fanaka. Ary napetrany ireo tao amin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah.
1 Mpanjaka 8
8:1 Ary ireo rehetra teraka lehibe amin'ny Isiraely, ny mpitarika ny foko sy ny mpanapaka ny fokon'ny zanak'Israely, nivory teo anatrehan'i Solomona mpanjaka tany Jerosalema, ka dia mba hitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah, avy any an-Tanànan'i Davida, izany hoe, avy any Ziona.
8:2 Ary ny Isiraely rehetra nivory teo anatrehan'i Solomona mpanjaka, ny fotoam-pivavahana tamin'ny volana Etanima, dia ny volana fahafito.
8:3 Ary ny loholon'ny Isiraely tonga, ary ny mpisorona no nitondra ny fiara.
8:4 Fa mavesatra amintsika sy ny fiaran'i Jehovah, ary ny tabernakely ny fanekena, ary ny fanaky ny fitoerana masina, izay tao amin'ny lay; ary ny mpisorona sy ny Levita nitondra ireo.
8:5 Ary Solomona mpanjaka dia, ary ny hamaroan'ny Isiraely rehetra, izay nivory teo anatrehany izy, nandroso niaraka taminy teo anoloan'ny fiara. Ary izy ireo sorona ondry aman'osy sy omby, izay tsy azo isaina na tombanana.
8:6 Ary ny mpisorona nitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehovah ho any amin'ny fitoerana, ho eo an-efitra anatiny ao amin'ny tempoly, ao amin'ny Masina Indrindra, teo ambanin'ny elatry ny kerobima.
8:7 Fa tokoa, omena ny kerobima ny elany teo ambonin'ny fitoeran'ny fiara, ary izy ireo niaro ny fiara sy ny barany avy any ambony.
8:8 Ary satria ny barany kasaina ivelany, ny faran'ny dia hita avy eo ivelany, ao amin'ny fitoerana masina eo anoloan'ny efitra anatiny; nefa tsy tazana lavitra kokoa ivelany. Ary ho amin'izany toerana na dia amin'ny andro ankehitriny.
8:9 Ary tao anatin'ny sambo-fiara, tsy nisy na inona na inona afa-tsy ny takela-bato roa, izay efa napetraka tao Mosesy azy tany Horeba, rehefa namorona ny Tompo fanekena tamin'ny Zanak'Isiraely, rehefa niala tany amin'ny tany Egypta.
8:10 Avy eo dia nitranga fa, raha ny mpisorona efa nivoaka avy amin'ny fitoerana masina, dia nisy rahona nameno ny tranon'i Jehovah.
8:11 Ary ny mpisorona dia tsy afaka ny hitsangana sy ny fanompoam-pivavahana, noho ny rahona. Satria ny voninahitr'i Jehovah nameno ny tranon'i Jehovah.
8:12 Ary Solomona nanao hoe:: "Ny Tompo dia nilaza fa hitoetra ao amin'ny rahona.
8:13 Building, Izaho efa nanao trano ho fonenanao, ny seza fiandriananao mandrakizay mafy orina indrindra. "
8:14 Ary ny mpanjaka nitodika ka nitso, Dia nitso-drano ny fiangonana, dia ny Isiraely rehetra. Fa ny fiangonana, dia ny Isiraely rehetra nitsangana teo.
8:15 Dia hoy Solomona: "Isaorana anie ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,, izay niteny ny vavany Davida raiko, ary izay, ny tanany, efa nahatanterahany izany, nanao hoe::
8:16 'Avy ny andro nitarika ny Isiraely oloko hiala avy tany Ejipta, Tsy nifidy aho amin'izay tanànan'ny avy tany rehetra ny firenen'Isiraely, ka dia ny trano dia haorina, ary toy izany koa fa ny hitoeran'ny anarako. Fa tsy, I nifidy an'i Davida Aho hanapaka ny Isiraely oloko. '
8:17 Ary Davida raiko Te hanao trano ho an'ny anaran'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,.
8:18 Fa hoy Jehovah tamin'i Davida raiko: 'Koa satria efa nikasa tao am-ponao ny fikasana hanao trano ho an'ny anarako, nataonao tsara, rehefa mandinika izany drafitra ao an-tsainao.
8:19 Na izany aza tena, tsy ianao no hanao trano ho ahy. Fa tsy, ny zanakao, izay dia hivoaka avy ny valahanareo, izy no hanao ny trano ho an'ny anarako. '
8:20 Ny Tompo dia notanterahiny ny teniny, izay nolazainy. Ary izany no mitsangana handimby an'i Davida raiko, ary hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny Isiraely, araka ny Tompo hoe:. Ary izaho efa nanao trano ho an'ny anaran'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,.
8:21 Ary Izaho dia manao fetr'andro fitoerana teo ho an'ny fiara, izay itoeran'ny faneken'i Jehovah dia namely tamin'ny razantsika, izy, raha nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. "
8:22 Ary Solomona nitsangana teo anoloan ny alitaran'i Jehovah, eo imason'ny fiangonana, dia ny Isiraely, ary izy dia nanatsotra ny tànany nanandrify ny lanitra.
8:23 Ary hoy izy:: "Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely,, tsy misy Andriamanitra tahaka Anao, any an-danitra ambony, na etỳ amin'ny tany ambany. Ianao miaro fanekena sy ny famindram-mpanomponao, izay mandeha eo anatrehanao amin'ny fony rehetra,.
8:24 Efa tanteraka, fa ny mpanomponao tsy David, ny raiko, fa izay nanao taminy hoe:. Vavanao, nolazainareo; sy ny tenanao tanana, no vita; manaporofo anio fotsiny.
8:25 Koa ankehitriny, Ry Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely,, hanatanteraka, fa ny mpanomponao tsy David, ny raiko, fa izay nolazainao taminy, nanao hoe:, 'Aoka tsy hisy Hesorina aminareo ho eo anatrehako,, izay mety hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny Isiraely, raha ny zanakao mitandrina ny alehany no, ka dia handeha eo anatrehako, toy ny nandehananao teo imasoko. '
8:26 Ary ankehitriny, Ry Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely,, mametraka ny teny, izay nolazainao tamin'i Davida mpanomponao, ny raiko.
8:27 Moa ve, avy eo, mba ho fantatra mazava fa tena Andriamanitra fa hitoetra eto an-tany? Fa raha any an-danitra, ary ny lanitry ny lanitra, tsy afaka omby Anao, koa mainka fa ity trano, izay nataoko?
8:28 Nefa jereo amin'ny famindram-po amin 'ny fivavaky ny mpanomponao sy ny eo amin'ny fanangonan-tsonia, Tompo O, Andriamanitra ô. Henoy ny hira sy ny vavaka, izay ataon'ny mpanomponao eto anatrehanao anio,
8:29 ka ny masonao mba ho misokatra ny amin'ity trano ity, andro aman'alina, eo amin'ny taranak'i momba izay nanao hoe:, 'Ho ao ny anarako any,'Mba hihaino ny vavaka fa ny mpanomponao no mivavaka amin'ity tany ity ho anao.
8:30 Noho izany ka henoy ny fifonan'ny mpanomponao sy ny Israely olonao, na inona na inona izy ireo no hivavaka ho eto amin'ity toerana ity, ary toy izany koa ka henoy azy ireo eo amin'ny fonenany any an-danitra. Ary rehefa manaraka, ianao dia ho hamindra fo.
8:31 Fa raha misy olona manota amin'ny namany, ary manana karazana fianianana izay dia voafehin'ny, Ary tonga noho ny fianianana, eo anoloan'ny alitaranao ao an-tranonao,
8:32 dia mihainoa any an-danitra, dia ho zavatra ary mitsarà ny mpanomponao, manameloka ny ratsy fanahy, ary mamaly ny fomba eo an-dohany ihany, fa hanamarina ny marina, sy mahafa-po azy araka ny rariny.
8:33 Ary raha ny Isiraely olonao dia efa nandositra ny fahavalony, satria efa nanota taminao, ary manao fivalozana sy niaiky ny anaranao, dia tonga dia mivavaka sy mangataka anareo ao amin'ity trano ity,
8:34 henoy any an-danitra, ka mamelà ny fahotan'ny Isiraely olonao, ka hitarika azy ireo hiverina ho any amin'ny tany, izay nomenao ny razany.
8:35 Ary raha efa mihidy ny lanitra, ka tsy misy ranonorana, noho ny fahotany, ary izy ireo, mivavaka eto amin'ity toerana ity, dia manao asa fivalozana ny anaranao, ary hiova fo amin'ny fahotany, ny fotoana ny fahoriany,
8:36 mihainoa azy any an-danitra, ka mamelà ny fahotan'ny mpanomponao sy ny Israely olonao. Ary manambara ho azy ny lalana tsara, teny izay tokony halehany, ary omeo anay ranonorana amin'ny taninao, izay nomenao ny olonao ho fananako.
8:37 Avy eo, raha mitsangana mosary ny tany, na ny areti-mandringana, na ratsy rivotra, na mampikorontana, na ny valala, na maty fotsy, na misy fahavalo nampahory azy ireo, fahirano eo am-bavahady, na izay kilema ratsy na,
8:38 na na inona na inona, na avy amin'Andriamanitra ozona-tsehatra mety hitranga misy olona eo amin'ny firenenao ny Isiraely, raha misy mahatakatra, rehefa avy naratra tao am-pony, ary raha izy no omena ny tànany manatrika ity trano ity,
8:39 dia mihainoa any an-danitra, ao amin'ny fonenanao, ary hamela. Ary ianao dia hanao zavatra mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany, araka izay hitanao ao am-pony, ho anao irery ihany no mahalala ny fon'ny rehetra ny zanak'olombelona.
8:40 Tahaka izany anie izy ireo hatahotra anao, amin'ny andro rehetra hiainany eo amin'ny lafin-tany, izay nomenao ny razanay.
8:41 Koa, ny vahiny koa, izay tsy isan'ny Isiraely olonao, rehefa ho efa tonga avy any an-tany lavitra noho ny amin'ny anaranao, fa ho reny ny momba ny anaranao be voninahitra, ary ny tanana mahery,
8:42 ary ny sandrinao nahinjitra na aiza na aiza: ka rehefa tonga, ary mivavaka eto amin'ity toerana ity,
8:43 dia hihaino any an-danitra, eo amin'ny habakabaky ny fonenanao. Ary ianao dia hanao ny zavatra rehetra, izay fa ho vahiny no niantsoako anao. Ho tahaka izany anie ny firenena rehetra eto an-tany hianatra hatahotra ny anaranao, tahaka ny Israely olonao anao. Ary toy izany koa izy ireo dia mety mampiseho fa ny anaranao no efa hampiharina ny ity trano ity, izay nataoko.
8:44 Ary raha ny olona nivoaka hiady amin'ny fahavalony, teny na inona na inona fomba, dia haniraka azy, dia mivavaka ho anareo amin'ny lalana tao an-tanàna, izay nofidiko, sy ny trano, izay nataoko ho an'ny anaranao.
8:45 Dia hihaino Hianao any an-danitra ny vavaka sy ny fangatahana. Ary dia hanatanteraka fitsarana ho azy ireo.
8:46 Fa raha manota aminao izy, fa tsy misy olombelona tsy manota, ary ianao, rehefa tezitra, manolotra azy eo amin'ny fahavalony, Dia tsy maintsy lasan-davitra toy ny babo any amin'ny tanin'ny fahavalony, na lavitra na ny akaiky,
8:47 Ary raha manao asa fivalozana izy ireo ao am-pony, eo amin'ny tany ny fahababoana, ary rehefa niova fo, mifona aminao ny fahababoana, nanao hoe:, 'Efa nanota izahay; dia nanao zavatra tsy ara-drariny; dia nanao impiety,'
8:48 ka dia miverina aminao amin'ny fony manontolo sy ny fanahiny rehetra, any amin'ny tanin'ny fahavalony, izay efa nentina ho babo, ary raha mivavaka aminareo amin'ny fitarihan 'ny taniny, izay nomenao ny razany, ary tao an-tanàna, izay nofidiko, ary ny tempoly, izay nataoko ho an'ny anaranao:
8:49 dia mihainoa any an-danitra, eo amin'ny habakabaky ny seza fiandriananao, ny vavaka sy ny fangatahana. Ary dia hanatanteraka ny fitsarana.
8:50 Ary hianareo dia hamela ny olona, izay efa nanota taminao, ary ny helony rehetra, izay efa nivadika hamely anao. Ary ianao dia manome azy famindram-po eo imason'ny olona izay nanao azy sambo-belona, mba hitondra hiantra azy.
8:51 Fa ireo dia firenenao sy lovanao, izay efa nitondra babo avy tany amin'ny tany Egypta, tsy ho eo amin'ny fatana fandrendreham-by.
8:52 Ary aoka ny masonao ho misokatra ny fifonan'ny mpanomponao sy ny Israely olonao. Ary toy izany koa no hanaraka azy ireo dia mety ny zavatra rehetra momba izay hiantso anao.
8:53 Fa efa no nanavaka azy ny tenanao ho lova, avy amin'ny firenena rehetra eto an-tany, fotsiny araka izay nampitondrainy an'i Mosesy, mpanomponao, rehefa nitondra ny razanay niala avy tany Ejipta, Ry Tompo Andriamanitra. "
8:54 Ary nony fa, rehefa vita vavaka Solomona manontolo izany vavaka sy fifonana ho an'ny Tompo, dia nitsangana niala teo imason 'ny alitaran'i Jehovah. Fa efa raikitra roa handohalika eo ambonin'ny tany, ary efa nampahazo ny tànany nanandrify ny lanitra.
8:55 Dia nitsangana izy ka nitso-drano ny fiangonana, dia ny Isiraely rehetra tamin'ny feo mahery, nanao hoe::
8:56 "Isaorana anie ny Tompo, izay nanome fitsaharana ho an'ny Isiraely olony, araka izay rehetra nanao hoe:. Tsy dia teny iray, avy tany rehetra ny zava-tsoa izay nampilazainy an'i Mosesy mpanompony, efa lavo niala.
8:57 Enga anie ny Tompo Andriamanitsika anie no amintsika, tahaka ny tamin'ny razantsika, tsy nandao antsika, fa tsy nanda antsika.
8:58 Fa mety izy hampanatoniny ny fontsika ho an'ny tenany, mba hahafahantsika handeha amin'ny lalany rehetra, sy mitandrina ny didiny, ary ny lanonana, ary na inona na inona ny fitsarana nandidiany ny razantsika.
8:59 Ary enga anie izany teny, izay efa nivavaka teo anatrehan'i Jehovah, ho akaiky an'i Jehovah Andriamanitsika, andro sy alina, ka mba hanatanteraka didim-pitsarana ho an'ny mpanompony sy ny Isiraely olony, mandritra ny andro tsirairay.
8:60 Ho tahaka izany anie ny firenena rehetra ambonin'ny tany ho fantatrareo fa ny Tompo mihitsy no Andriamanitra, ary tsy misy hafa afa-tsy izy.
8:61 koa, Mety fontsika ho marina amin'i Jehovah Andriamanitsika, mba hahafahantsika handeha amin'ny didim-panjakana, sy mitandrina ny didiny, toy ny amin'izany andro izany. "
8:62 Ary ny mpanjaka, ary ny rehetra amin'ny Isiraely izay nanaraka azy, sorona niharam-boina anoloan 'ny Tompo.
8:63 Ary Solomona namono fanati-pihavanana, izay sorona ho an'ny Tompo: amby roa-omby roa arivo, amby roa arivo sy iray hetsy ondry. Ary ny mpanjaka sy ny zanak'Israely nitokana ny tempolin'ny Tompo.
8:64 Tamin'izany andro izany, ny mpanjaka nanamasina ny afovoan'ny atrium, izay teo anoloan'ny tranon'i Jehovah. Fa amin 'izany toerana, nateriny Famonoana Tambabe, sy ny sorona, ary ny saboran'ny-pihavanana. Fa ny alitara varahina, izay teo anatrehan'i Jehovah, kely loatra ka tsy afaka mihazona ny Famonoana Tambabe, ary ny fanatitra, ary ny saboran'ny fanati-pihavanana.
8:65 Ary Solomona nanao, tamin'izany fotoana izany, ny fankalazana fety, ary ny rehetra amin'ny Isiraely izay nanaraka azy, dia nisy vahoaka betsaka, avy any akaikin'i Hamata ho any amin'ny reniranon'i Ejipta, eo imason'ny Tompo Andriamanitsika, mandritra ny fito andro miampy fito andro, izany hoe, efatra ambin'ny folo andro.
8:66 Ary amin'ny andro fahavalo, dia nampirava ny olona. Ary mitso-drano ny mpanjaka, dia niainga ho any an-dainy, fifaliana sy falifaly am-po rehetra ny zavatra tsara fa ny Tompo efa nataon'i Davida mpanompony sy ny Isiraely olony.
1 Mpanjaka 9
9:1 Ary nitranga fa, rehefa tanteraka Solomona ny nanaovany ny tranon'i Jehovah, ary an-tranon'ny mpanjaka, ary izay rehetra efa mahafinaritra sy efa sitrak'Andriamanitra hanao,
9:2 ny Tompo niseho taminy fanindroany, araka ilay nisehoany taminy tao Gibeona.
9:3 Ary hoy Jehovah taminy: "Efa reko ny vavakao sy ny fanangonan-tsonia, izay nivavaka eo anatrehako. Efa nohamasiniko ity trano ity, izay efa nanorina, ka dia mba hametraka ny anarako mandrakizay, ary toy izany koa fa ny masoko sy ny foko ho ao ny andro rehetra.
9:4 koa, raha handeha eo anatrehako, toy ny efa nalehan, amin'ny fahatsoram-po sy ny fahitsiana, ary manao izay rehetra efa nampianatra anareo, ary mitandrina ny didiko sy ny fitsipiko,
9:5 dia hampitoetra ny seza fiandrianan'ny fanjakany amin'ny Isiraely mandrakizay, araka ilay nolazaiko Davida rainao, nanao hoe:: 'Lehilahy iray avy amin'ny tahiry dia tsy halaina amin'ny seza fiandrianan'ny Isiraely ianao.'
9:6 Fa raha ianao sy ny zanakao, firenirenin'ny, Ho no nampiala, tsy manaraka ahy, ary tsy nitandrina ny didiko sy ny lanonana, izay efa nanolo-kevitra ho anao, fa handeha kosa ianao, ary manompo andriamani-kafa sy mankafy azy,
9:7 dia Hesoriko ny Isiraely amin'ny lafin-tany, izay efa nomeko azy ireo. Ary ny tempoly, izay efa nohamasiniko ho an'ny anarako, Handroaka masoko. Ary ny Isiraely no ho ohabolana sy fanoharana any amin'ny firenena rehetra.
9:8 Ary ity trano ity ho lasa ohatra: olona mandalo azy dia ho gaga, dia Misitrisitra sy hoe:, 'Nahoana Jehovah no nanao zavatra toy izany ity tany sy ity trano ity?'
9:9 Ary dia hamaly: 'Satria izy ireo nahafoy an'i Jehovah Andriamaniny, izay nitondra ny razany niala avy tany amin'ny tany Egypta, dia nanaraka andriamani-kafa, dia niankohoka izy ireo ka nanompo azy. Izany no antony, ny Tompo no nitarika izao loza rehetra izao azy. ' "
9:10 Avy eo, rehefa tapitra ny roa-polo taona, rehefa avy Solomona ny trano roa, izany hoe, ny tranon'i Jehovah, sy ny tranon'ny mpanjaka,
9:11 Hiram, ny mpanjakan'i Tyro, dia nanome an'i Solomona hazo sedera hazo, ary ny hazo kesika, ary ny volamena, araka izay rehetra nilainy, Ary Solomona kosa nanome an'i Hirama tanàna roa-polo tany amin'ny tany Galilia.
9:12 Ary Hirama niala tao Tyro, ka dia mba hijery ny tanàna izay nomen'i Solomona azy. Ary tsy tiany.
9:13 Ary hoy izy:, "Moa ny tanàna izay nomenao ho ahy, rahalahy?"Ary niantso azy ny tany Kabola, mandraka androany.
9:14 Ary Hirama naniraka tany amin'i Solomona mpanjaka roa-polo amby zato talenta volamena.
9:15 Ary izao no isan'ny ny vola lany izay natolotr'i Solomona Mpanjaka ho fanorenana ny tranon'i Jehovah, sy ny lapan'ny tenany, ary Milo, ary ny mandan'i Jerosalema, sy Hazora, sy Megido, ary Gazera.
9:16 Farao, ny mpanjakan'i Egypta, niakatra ka nisambotra an'i Gazera, Ary nandoro azy tamin'ny afo. Dia namono ny Kananita, izay nonina tao an-tanàna, ary nomeny ho haren-jazavavy ho an'ny zananivavy, ny vadin'i Solomona.
9:17 Noho izany, , Solomona nanamboatra an'i Gazera ny, ary Beti-horona ambany,
9:18 sy Baleta, ary Palmira tany amin'ny tany an-efitra.
9:19 Ary ny tanàna rehetra izay an'i azy, ary izay tsy misy manda, dia misy manda, miaraka amin'ny tanàna any amin'ny tany kalesy, ary ny tanàna any amin'ny tany mpitaingin-tsoavaly, ary na inona na inona sitrany dia mba haorina tany Jerosalema, sy tany Libanona, ary any amin'ny tany rehetra nanjakany.
9:20 Ary ny olona rehetra izay sisa tamin'ny Amorita, ary ny Hetita, sy ny Perizita, sy ny Hivita, ary ny Jebosita, izay tsy isan'ny Zanak'Isiraely ny,
9:21 ny zanany lahy, izay sisa tany amin'ny tanin'ny, izany hoe, ireo izay ny Zanak'Isiraely ka tsy mbola nisy afaka mandrava, Nataon'i Solomona fanompoana, mandraka androany.
9:22 Fa avy ny Zanak'Isiraely, Solomona tsy nanendry na iza na iza mihitsy ny hanompo, afa-tsy ny miaramila, Ary ny mpanompony, sy ny mpitarika, ary ny mpifehy, ary ny mpiandraikitra ny kalesy sy ny soavaly.
9:23 Ary nisy dimam-polo amby diman-mpitarika teo amin'ny toerana voalohany ny rehetra nataon'ny Solomona, ary nanana ny olona nankatò azy ireo, Ary izao no baiko nomena ho an'ny asa voatendry.
9:24 Ary ny zanakavavin'i Farao niakatra avy tany an-Tanànan'i Davida ho any an-tranony, izay nataon'i Solomona ho azy. Ary namboariny Milo.
9:25 koa, in-telo isan-taona, Solomona nanatitra sorona dorana sy ny niharam-boina-pihavanana, teo ambonin'ny alitara izay nataony ho an'ny Tompo, Ary nandoro ditin-kazo manitra eo anatrehan'i Jehovah. Ary ny tempoly dia tanteraka.
9:26 Ary Solomona mpanjaka nanao ny tafika an-dranomasina tao Ezion-gebera, izay ao anilan'i Elota, ny amoron'ny Ranomasina Mena, tany amin'ny tany Edoma.
9:27 Ary Hirama naniraka ny mpanompony ho any izany tafika an-dranomasina, ny tantsambo sy ireo manam-pahalalana momba ny ranomasina, hiaraka amin'ny vahoakan'i Solomona.
9:28 Ary nony efa lasa ho any Ofira, maka niala teo roa-polo amby efa-jato talenta volamena, dia nentiny tany amin'i Solomona mpanjaka.
1 Mpanjaka 10
10:1 Avy eo, koa, ny mpanjakavavin'i Sheba, rehefa nahare ny lazan'i Solomona amin 'ny anaran' ny Tompo, tonga hitsapa azy amin'ny fanambarana teny sarotra.
10:2 Ary raha niditra tao Jerosalema izy mbamin'ny narahin'ny kalesy lehibe, sy ny harena, ary rameva nitondra aromatics, sy miaraka amin'ny be dia be izaitsizy tokoa ny volamena sy vato soa, dia nankany amin'i Solomona mpanjaka. Ary niteny taminy izy rehetra mbamin'izay nety ho natao tao am-pony.
10:3 Ary Solomona dia nampianatra azy, in ny teny rehetra izay efa nanolo-kevitra taminy. Tsy nisy teny izay azo afenina amin'ny mpanjaka, na izay tsy namaly azy.
10:4 Avy eo, raha ny mpanjakavavin'i Sheba nahita ny fahendren'i Solomona, sy ny trano izay nataony,
10:5 sy ny fihinany teo amin'ny latabany, ary amin'ny tranon'ny mpanompony toerana, ary ny andalana ny mpanompony, ary ny fitafian'ireo, ary ny mpandroso zava-pisotro, ary ny sorona dorana izay dia fanatitra tao an-tranon'i Jehovah, Tsy nanana intsony izy misy fanahy teny an-.
10:6 Dia hoy izy tamin'ny mpanjaka: "Ny teny Marina, izay efa reko tany amin'ny taniko,
10:7 momba ny teny sy ny fahendrenao. Fa izaho tsy nino ireo izay nanazava azy tamiko, mandra-tenako aho, dia nandeha ka nahita azy ny masoko. Ary nahita aho fa ny antsasany dia tsy nolazaina tamiko: ny fahendrenao sy ny asa dia lehibe noho ny tatitra izay efa reko.
10:8 Sambatra ny olona, ary sambatra ny mpanomponao, izay mitsangana eo anatrehanao mandrakariva, ary izay mandre ny fahendrenao.
10:9 Sambatra ny TOMPO Andriamanitrareo, izay efa tena faly, ary iza no nametraka anao eo amin'ny seza fiandrianan'ny Isiraely. Fa Jehovah tia ny Isiraely mandrakizay, ary Izy efa nanendry anao ho mpanjaka, mba hanatanteraka fitsarana sy fahamarinana. "
10:10 Ary izy nanome ny mpanjaka roa-polo amby zato talenta volamena, ary lehibe izaitsizy tokoa habetsahan'ny aromatics ary vato soa ho. Tsy misy lehibe kokoa dia be ny aromatics intsony entina mivoaka toy izany, izay ny mpanjakavavin'i Sheba ho an'i Solomona mpanjaka nanome.
10:11 Avy eo, koa, ny sambon'i Hirama, izay nitondra volamena avy any Ofira, nitondra indrindra be dia be ny hazo mani-pofona sy ny vatosoa avy any Ofira.
10:12 Ary ny mpanjaka nanao, avy amin'ny hazo mani-pofona, ny lahatsoratra tao an-tranon'i Jehovah, sy ny tranon'ny mpanjaka, ary citharas sy valiha ho an'ny mpihira. Tsy misy hazo mani-pofona toy izany intsony ireo, ka nentiko nivoaka na hita, na dia hatramin'ny andro ankehitriny.
10:13 Ary Solomona mpanjaka dia nanome ny mpanjakavavin'i Sheba kosa izay rehetra fa mahafinaritra sy nangataka taminy, ankoatra ny zavatra ihany no nanolotra azy amin'ny mpanjaka fanomen'i. Dia niverina izy, ary lasa nody tany amin'ny taniny, sy ny mpanompony.
10:14 Ary ny lanjan'ny volamena izay nampidirina amin'i Solomona isan-taona dia enina amby enim-polo amby enin-talenta volamena,
10:15 ankoatra izay dia nentina teo aminy ny lehilahy izay nifehy ny fanomezam-boninahitra, ary ny mpivarotra, ary ny mpivarotra isan-karazany ny zavatra madinika, ary ny mpanjaka rehetra any Arabia, sy ny mpanapaka ny tany.
10:16 koa, Solomona mpanjaka nanao ampinga lehibe roanjato avy ny tena volamena tsara. Ary omen'ny sekely enin-jato ny volamena hanaovana ny sosona iray ampinga.
10:17 Ary ny telon-jato Crescent miendrika ampinga volamena fitiliana, teo koa izy telo mane no volamena jato mandrakotra ampinga iray. Ary ny mpanjaka nametraka izany tao amin'ny trano Alan'i Libanona.
10:18 koa, Solomona mpanjaka nanao seza fiandrianana lehibe avy amin'ny ivoara. Ary niakanjo azy amin'ny be dia be ny volamena mena.
10:19 Ny seza fiandrianana Nisy ambaratonga enina, ary ny tampon'i ny seza fiandrianana dia boribory ao amin'ny fizarana indray. Ary nisy tanana roa, eo amin'ny lafiny iray ary ny anankiray, mihazona ny fanaovam-panavotana. Ary ny sarin-diona roa nijanona teo anilan'ny isan-tanana,
10:20 amin'ny roa ambin'ny folo liona kely nitsangana teo amin'ny ambaratonga enina, eo amin'ny lafiny iray ary ny anankiray. Tsy misy toy izany koa ny asa natao, mbola tany amin'ny fanjakana rehetra.
10:21 Koa, ny fanaka rehetra izay an'i Solomona mpanjaka dia hisotro dia volamena. Ary ny zavatra rehetra ao an-trano Alan'i Libanona koa dia ny tena volamena tsara. Tsy nisy volafotsy, na dia nisy kaonty vita amin'ny volafotsy tamin'ny andron'i Solomona.
10:22 Fa ny tafika an-dranomasina ny mpanjaka, indray mandeha isan-telo taona, nandeha mbamin'ny sambon'i Hirama amin'ny ranomasina ho any Tarsisy, nitondra niala teo volamena, ary ny volafotsy, ary ny elefanta tusks, ary ny rajako, ary vorombola.
10:23 Ary noho izany, i Solomona mpanjaka voninahitra mihoatra noho ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany nanan-karena sady hendry.
10:24 Ary ny tany naniry hahita ny tavan'i Solomona, mba hihaino ny fahendrena, izay efa nomena ny fony.
10:25 Ary samy nitondra azy fanomezam-pahasoavana, fanaka volafotsy sy ny volamena, akanjo sy ny fitaovam-piadiana, ary koa ny aromatics, ary ny soavaly, ary ampondra, mandritra isan-taona.
10:26 Ary Solomona nanangona kalesy sy mpitaingin-tsoavaly. Ary nanana arivo kalesy efa-jato amby, ary ny mpitaingin-tsoavaly roa arivo amby iray. Ary namponina azy teny amin'ny tanàna mimanda, dia tapaka, sy tao amin'ny mpanjaka tany Jerosalema.
10:27 Ary nataony tahaka ny volafotsy ho be Jerosalema tahaka ny vato ny, ary izy nanome maro be sedera toy ny aviavy izay mitombo amin'ny tani-hay.
10:28 Ary ny soavaly nentina ho Solomona avy any Ejipta sy avy any Kue. Fa ny mpandranto amin'ny mpanjaka dia mividy izany avy Kue. Ary nandoa ny vidiny orina.
10:29 Ary nisy kalesy efatra-tsoavaly ho iraka avy tany Egypta dia sekely enin-jato volafotsy, ary ny soavaly dia dimam-polo amby zato. Ary izany no fomba, rehetra ny mpanjakan'ny Hetita sy ny Syria nivarotra soavaly.
1 Mpanjaka 11
11:1 Fa Solomona mpanjaka tia vehivavy maro hafa firenena, anisan'izany ny zanakavavin'i Farao, sy ny vehivavy Moabita, ary Amona, ary ny Edoma, ary tany Sidona, ary ny Hetita.
11:2 Dia nisy avy amin'ny firenena momba izay nolazain'ny Tompo tamin'i zanak'i Isiraely: "Ary tsy hiditra ho azy ireo, ary tsy misy azy hiditra na iza na iza ny anao. Fa dia tena azo antoka fa hivily ny fonareo, mba hanaraka ny andriamaniny. "Ary mbola, ireo dia raikitra Solomona tamin'ny enflamed tena fitiavana.
11:3 Ary ho azy, nisy fiton-jato vady, toy ny hoe izy ireo mpanjakavavy, Taon-jato sy vaditsindrano. Ary ny vehivavy nivily ny fony.
11:4 Ary rehefa antitra izy ankehitriny, ny fony navadikareo ny vehivavy, ka dia nanaraka andriamani-kafa. Ka ny fony tsy mba nahitsy tamin'i Jehovah Andriamaniny, tahaka ny fon'i Davida rainy.
11:5 Fa Solomona niankohoka teo anatrehan'i Astarta, , andriamani-bavin'ny Sidoniana, ary Milkoma, ny sampy taranak'i Amona,.
11:6 Ary Solomona nanao izay tsy ankasitrahana eo imason'Andriamanitra 'ny Tompo. Ary tsy manohy manaraka ny Tompo, tahaka ny nataon'i Davida rainy.
11:7 Ary Solomona nanao ny toerana masina ho an'i Kemosy, ny sampy Moaba, teo an-tendrombohitra izay tandrifin'i Jerosalema, ary Milkoma, ny sampy ny taranak'i Amona.
11:8 Ary nanao toy izany koa izy ho an'ny vadiny hafa firenena rehetra,, izay nandoro ditin-kazo manitra sy ny immolating ho an'ny andriamaniny.
11:9 Ary noho izany, ny Tompo dia tonga tezitra tamin'i Solomona, an-tsainy, satria efa niala avy amin'ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,, Izay efa niseho taminy indroa,
11:10 ary izay nampianatra azy momba izany zavatra izany, fandrao manaraka andriamani-kafa. Nefa tsy mitandrina ny zavatra nandidian'i Jehovah azy.
11:11 Ary noho izany, hoy Jehovah tamin'i Solomona: "Satria manana izany miaraka aminao, ary satria ianao tsy nitandrina ny fanekeko sy ny fitsipika, izay notendreko ho anareo, Izaho no hamiravira afa ny fanjakanao, ary Izaho no hanome azy ny mpanomponao.
11:12 Na izany aza tena, Tsy hanao izany amin'ny andronareo, noho ny amin'i Davida rainao. Amin'ny tanan'ny zanakao, Izaho no hamiravira azy izy.
11:13 Ary tsy efa hesoriko ny fanjakana rehetra. Fa tsy, Hataoko mahita firenena iray ihany ny zanakao, noho ny amin'i Davida, mpanompoko, sy Jerosalema, izay nofidiko. "
11:14 Ary Jehovah nanangana fahavalo hanohitra an'i Solomona, Hadada ny Idomea, avy amin'ny taranaky ny mpanjaka izay tao Idomea.
11:15 Fa Davida dia tany Idomea, Joaba, ny mpitarika ny miaramila, dia niakatra handevina ireo izay efa maty, ary efa namono ny lehilahy rehetra tao Idomea.
11:16 Ary Joaba nitoetra amin'izany toerana ho enim-bolana, tamin'ny Isiraely rehetra, mandra-namono ny lehilahy rehetra tao Idomea.
11:17 Dia nandositra Hadada, izy sy ny mponina tao Idomea sasany avy teo amin'ny mpanompon'i ny rainy niaraka taminy, ka mba miditra ao Ejipta. Fa i Hadada Ary nisy zazalahy kely.
11:18 Ary rehefa nitsangana avy any Midiana, dia niditra tao Parana, ary dia nentiny niaraka taminy ny lehilahy sasany avy tany Parana. Dia nandeha ho any Egypta, tamin'i Farao, ny mpanjakan'i Egypta. Ka dia nomeny azy ny trano, ary izy nanendry nahandro ho azy, ary tany dia nanendry azy.
11:19 Ary Hadada nahita fitia fatratra teo anatrehan'i Farao, loatra ka dia nomeny azy ho vadiny, ny anabavin'i ny vadiny, vadin'ny mpanjaka, Tapanesa.
11:20 Ary ny rahavavin'i Tapanesa niteraka zazalahy taminy, Genobata. Ary nanangana azy notazan'i Tapanesa tao an-tranon'i Farao. Ary i Genobata miaina miaraka amin'ny Farao sy ny zanany.
11:21 Ary rehefa ren'i Hadada efa tany Egypta fa Davida efa lasa nodimandry any amin'ny razany, ary Joaba, ny mpitarika ny miaramila, maty, dia hoy izy tamin'i Farao, "Afaho aho, ka javatra aho hankanesako any amin'ny taniko. "
11:22 Ary hoy Farao taminy:, "Fa inona no tsy ampy aminao amiko, ka dia ianao no dia mitady hody any amin'ny taninareo?"Fa izy namaly: "Tsy misy. Nefa mananatra anareo aho mba handefa ahy. "
11:23 koa, Andriamanitra nanangana azy ho fahavalo, antony, ny zanak'i Eliada, izay efa nandositra ny tompony, Hadad-Ezer, ny mpanjakan'i Zoba.
11:24 Ary novoriny ny olona azy. Ary rehefa nanao Davida ireo, avy any Zoba ho faty, dia tonga mpitarika ny jiolahy. Dia nandeha ho any Damaskosy, ka nonina teo. Ary nanokana azy ho mpanjakan'i Damaskosy.
11:25 Ary izy koa dia fahavalon'ny Isiraely tamin'ny andro rehetra niainan'i Solomona. Ary toa azy ny ratsy Hadada sy ny fankahalany tamin'ny Isiraely. Ary no nanjakany tany Syria.
11:26 koa, nisy Jeroboama, ny zanak'i Nebata, Efraimita avy any Zareda iray, mpanompon'i Solomona, izay no atao hoe reniny Zeruah, ny vehivavy maty vady. Dia nanandratra ny tànany hamely ny mpanjaka.
11:27 Ary izany no antony ny fikomiany azy: fa Solomona nanorina an'i Milo ny, ary dia feno tao amin'ny lavaka lalina tao an-Tanànan'i Davida, ny rainy.
11:28 Ary Jeroboama dia lehilahy mahery sady matanjaka. Ka nahita ny zatovo ho fomba mahavariana sy mazoto miasa, Solomona nanendry azy ho mpanapaka aloha ny hetra amin'ny taranak'i Josefa rehetra.
11:29 Ary nony, amin'izany andro, fa Jeroboama niala tany Jerosalema. Ary ny mpaminany Ahia, Silonita, fanaovana amin'ny lamba vaovao, nahita azy teny an-dalana. Ary ny roa lahy ihany no tany an-tsaha.
11:30 Ary naka ny lambany vaovao, izay nampiteny azy rakotra, Ahia nandriatra azy ho roa ambin'ny folo toko.
11:31 Ary hoy izy tamin'i Jeroboama: "Raiso ho anao ny tapatapany folo. Fa izao no lazain'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,: 'Indro, Izaho efa hanendaka ny fanjakana amin'ny tànan'i Solomona, dia homeko anao ny firenena folo.
11:32 Nefa ny firenena iray dia mbola hitoetra aminy, noho ny mpanompoko, David, ary koa tany Jerosalema, tanàna izay nofidiko tamin'ny firenen'Isiraely rehetra Israely.
11:33 Fa efa nandao ahy, ary efa niankohoka teo anatrehan'i Astarta, , andriamani-bavin'ny Sidoniana, ary Kemosy, ny andriamanitr'i Moaba, ary Milkoma, ny andriamanitry ny taranak'i Amona. Ary tsy nandeha tamin'ny lalako, ka dia hanao ny rariny eo anatrehako, ary toy izany koa fa hanatanteraka ny didy sy fitsipika, tahaka ny nataon'i Davida rainy.
11:34 Nefa tsy hesoriko ny fanjakana manontolo tamin'ny tanany. Fa tsy, Izaho kosa hampitoetra azy ho mpanapaka nandritra ny andro rehetra niainany, noho ny amin'i Davida mpanompoko, izay nofidiko, izay nitandrina ny teniko sy ny fitsipika.
11:35 Fa hesoriko ny fanjakana eo an-tanan'ny zanany, dia homeko anao ny firenena folo.
11:36 Avy eo, ny zanany, Homeko firenena iray, ka mety hijanona jiro ho an'ny Davida mpanompoko eo anatrehako, ho an'ny andro rehetra, tany Jerosalema, ny tanàna izay nofidiko, ny anarako mba ho any.
11:37 Ary halaiko anao, ary ianao no hanjaka amin'izay rehetra irin'ny fonao. Ary ianao no ho mpanjaka amin'ny Isiraely.
11:38 Noho izany, raha mihaino izay rehetra andidiako anao aho, Ary raha handeha amin'ny lalako, ary manao izay mahitsy eo imasoko, mitandrina ny didiko sy ny fitsipika, toy ny nataon'i Davida mpanompoko, dia homba anao, ary haoriko ho anareo mahatoky trano, teny an-dalana izay nanao trano ho an'i Davida, ary Izaho no hanafaka ny Israely ho anareo.
11:39 Ary Izaho hampietry ny taranak'i Davida noho izany, nefa tsy marina ho an'ny andro rehetra. ' "
11:40 Noho izany, Solomona nitady hamono an'i Jeroboama. Fa niainga ihany izy ka nandositra ho any Ejipta, ho any amin'i Sisaka, ny mpanjakan'i Egypta. Ary izy nitoetra tany mandra-pahafatin'i Solomona.
11:41 Ary ny sisa amin'ny tenin'i Solomona, ary izay rehetra nataony, ary ny fahendreny: indro, Ireo rehetra ireo dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny ny tenin 'ny andron'i Solomona.
11:42 Ary ny andro nanjakan'i Solomona tany Jerosalema, dia ny Isiraely rehetra, dia efa-polo taona.
11:43 Ary Solomona lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao an-Tanànan'i Davida, ny rainy. ary Rehoboama, zanany, no nanjaka nandimby azy.
12:1 Ary Rehoboama nankany Sekema,. Fa amin 'izany toerana, rehetra amin'ny Isiraely efa nivory ny hanendry azy ho mpanjaka.
12:2 Na izany aza tena, Jeroboama, ny zanak'i Nebata, raha mbola tany Ejipta toy ny mpandositra ny tavan'i Solomona mpanjaka, nandre ny fahafatesany, niverina avy any Ejipta.
12:3 Ka dia naniraka naka azy. Noho izany, Jeroboama lasa, ny hamaroan'ny Isiraely rehetra, ka niteny tamin-dRehoboama, nanao hoe::
12:4 "Ny rainy nametraka tena henjana zioga eo amintsika. Ary noho izany, tokony izao hanaisotra kely amin'ny tena henjana fanjakana tan-drainao sy ny zioga mafy indrindra, izay nametraka antsika, ary dia hanompo anao izahay. "
12:5 Ary hoy Izy taminy:, "Andehana mandeha, mandra-pahatongan'ny andro fahatelo, ary avy eo dia hiverina atỳ amiko. "Ary rehefa ny olona efa lasa,
12:6 Rehoboama mpanjaka naka hevitra tamin'ny loholona izay efa nanampy talohan'ny Solomona rainy raha mbola velona. Ary hoy izy:, "Ahoana no hevitra no omeo ahy, dia mba hamaly ny amin'ity firenena ity?"
12:7 Dia hoy ireo taminy, "Raha anio no hankatò sy hanompo ity vahoaka ity, ary manaiky ny fanangonan-tsonia, ary raha hiteny mandefitra teny mora aminy, dia ho mpanomponao rehetra andro. "
12:8 Fa nandao ny hevitra nomen'ireo zoki-olona, izay efa nomena azy. Ary naka hevitra tamin'ny tovolahy izay efa natsangana taminy, sy izay manampy azy.
12:9 Ary hoy Izy taminy:: "Ahoana no hevitra no omeo ahy, dia mba hamaly ny amin'ity firenena ity, izay nilaza tamiko: 'Manamboara mandrehitra ny zioga izay nampanompoany-drainao taminay?'"
12:10 Ary ny zatovo izay efa natsangana taminy, nanao hoe:: "Ary hiteny toy izany amin'ity firenena ity, izay efa nolazaiko taminao, nanao hoe:: 'Ny rainao vesaran'ny ny zioga. Tokony hanampy antsika. 'Ary izao no afaka lazainao azy ireo: 'Ny ankihikeliko dia lehibe noho ny indray ny raiko.
12:11 Ary ankehitriny, ny raiko nametraka mavesatra ziogako, fa izaho kosa mainka hanampy ny zioga ho entinareo koa amin'i. Ny raiko hanapaka anareo amin'ny karavasy, fa izaho kosa nikapoka anao maingoka fikapohana. ' "
12:12 Noho izany, Jeroboama sy ny vahoaka rehetra nankany amin-dRehoboama tamin'ny andro fahatelo, araka izay efa nolazain'i ny mpanjaka, nanao hoe:, "Miverena amiko amin'ny andro fahatelo."
12:13 Ary ny mpanjaka namaly ny vahoaka mafy, namela ny torohevitry ny anti-panahy izay efa nomena azy.
12:14 Ary Izy niteny taminy araka ny hevitra nomen'ireo tovolahy, nanao hoe:: "Ny raiko vesaran'ny ny zioga ho entinareo, fa izaho kosa mainka hanampy ny zioga ho entinareo bebe kokoa. Ny raiko hanapaka anareo amin'ny karavasy, fa izaho kosa nikapoka anao maingoka fikapohana. "
12:15 Ary ny mpanjaka dia tsy sitrapon'Andriamanitra ny olona. Fa Jehovah efa niodina azy, ka mba hamelo-maso ny teniny, izay efa nolazain 'ny tanan' Ahia, Silonita, tamin'i Jeroboama, ny zanak'i Nebata.
12:16 Ary toy izany koa ny olona, nahita fa ny mpanjaka tsy nety nihaino azy ireo, namaly azy, nanao hoe:: "Inona no manana anjara amin'i Davida? Ary inona no Lova Tokony ananantsika ao amin'ny zanak'i Jese? Mandehana any amin'ny trano rantsan-kazo anao manokana, Ry Isiraely. Ary Davida, jereo ny taranakao. "Dia nandeha ny Isiraely ho any ny trano rantsan-kazo.
12:17 Fa rehetra ny zanak'Israely izay nonina tany an-tanànan'ny Joda,, Rehoboama no nanjaka.
12:18 Ary Rehoboama mpanjaka dia naniraka Adoram, izay, no mpifehy ny fanompoana. Ary ny Isiraely rehetra nitora-bato azy, dia maty izy. Noho izany, Rehoboama mpanjaka haingana, niakatra ho any an-kalesy, ka nandositra tany Jerosalema.
12:19 Ary ny Isiraely mby ho afaka tamin'ny taranak'i Davida, na dia hatramin'ny andro ankehitriny.
12:20 Ary nony fa, raha ny Isiraely rehetra efa reny fa efa niverina Jeroboama, manangona fivoriambe, dia naniraka naka azy, ary nanendry azy ho mpanjakan'ny Isiraely rehetra. Ary tsy nisy nanaraka ny taranak'i Davida, afa-tsy ny firenen'i Joda ihany.
12:21 Ary Rehoboama nankany Jerosalema, Ary namory ny taranak'i Joda manontolo, ary ny firenen'i Benjamina, iray valo alina amby zato olom-boafidy lehilahy mpiady, ka mba hiady amin'ny taranak'Isiraely, ka hampody ny fanjakana indray ho an-dRehoboama, ny zanak'i Solomona.
12:22 Kanjo kosa ny tenin'i Jehovah tonga tao amin'i Semaia, ilay lehilahin'Andriamanitra, nanao hoe::
12:23 "Mitenena amin-dRehoboama, ny zanak'i Solomona, ny mpanjakan'ny Joda,, ary ho an'izay rehetra amin'ny taranak'i Joda, ary Benjamina, ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka, nanao hoe::
12:24 'Izao no lazain'i Jehovah: Aza miakatra, ary aza miady amin'ny rahalahinareo, ny zanak'i Isiraely. Aoka ny olona rehetra samy hiverina any an-tranony. Fa izao teny izao avy amiko. ' "Dia nihaino ny tenin' ny Tompo, Ary niverina avy ny dia, araka ny tenin'i Jehovah izay nampianatra azy ireo.
12:25 Ary Jeroboama dia nanamboatra an'i Sekema ny, tao amin'ny tany havoan'i Efraima, ka dia nonina tao. Ary niala teo, namboariny Penoela.
12:26 Ary Jeroboama nanao anakampo hoe:: "Izao ny fanjakana dia hody amin'ny taranak'i Davida,
12:27 fa raha miakatra hamono zavatra hatao fanatitra ao amin'ny tranon'i Jehovah any Jerosalema. Ary ny fon'ny firenena ity dia hiova fo ny tompony Rehoboama, ny mpanjakan'ny Joda,, ary dia hamono ahy, ka hiverina aminy. "
12:28 Ary namorona sain drafitra, dia nanao ombilahy kely volamena roa. Ary hoy Izy taminy:: "Tsy misy intsony misafidy ny hiakatra ho any Jerosalema. Indro, Io no andriamanitrao, Ry Isiraely, izay nitondra anareo hiala tany amin'ny tany Egypta!"
12:29 Ary nametraka ny anankiray tao Betela, ary ny anankiray kosa dia tao Dana.
12:30 Ary izao teny izao dia tonga ny fotoana ny fahotana. Fa ny olona dia nandeha mankafy ny ombilahy kely, hatrany Dana.
12:31 Ary nanao sarin'ny tempolin'i teo amin'ny fitoerana avo, Ary nanao mpisorona rehetra avy tamin'ny olona ambany indrindra, izay tsy isan'ny taranak'i Levy.
12:32 Ary notendreny fotoam-pivavahana ao amin'ny volana fahavalo, tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana, Manahaka ny panajana fa efa nankalazaina tany Joda. Ary niakatra ho eo amin'ny alitara, dia nanao toy izany koa ny tao Betela, ka dia sorona ho an'ireo ombilahy kely, izay efa nataony. Ary tao Betela, notendreny ho mpisorona amin'ny fitoerana avo, izay efa nataony.
12:33 Ary niakatra tany amin'ny alitara, izay efa natsangana tao Betela, tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahavalo,, ny andro izay efa nanapa-kevitra ny fony. Ary nanao panajana ho an'ny zanak'Israely, Ary niakatra tany amin'ny alitara, ka dia handoro ditin-kazo manitra mba.
1 Mpanjaka 13
13:1 Ary indro, araka ny tenin 'ny Tompo, nisy lehilahin'Andriamanitra avy tany Joda nankany Betela, rehefa Jeroboama nijanona teo ambonin'ny alitara, ary nandoro ditin-kazo manitra.
13:2 Ary amin 'ny tenin' ny Tompo, dia niantso ny alitara. Ary hoy izy:: "Ny alitara, ny alitara! Izao no lazain'i Jehovah: 'Indro, zazalahy ho teraka ao an-tranon'i Davida, Josia no ho anarany. Ary eo ianao, immolate dia ny mpisorona amin'ny fitoerana avo, Ankehitriny dia handoro ditin-kazo manitra eo aminareo. Ary eo ianao, kosa hodorany taolan'olona ny nitoerany. ' "
13:3 Ary naneho fahagagana tamin'ny andro, nanao hoe:: "Izao no ho famantarana fa ny Tompo no efa niteny. Indro, ny alitara dia ho rava, ary ny lavenona izay eo amboniny dia nanidina ny diloilo. "
13:4 Ary rehefa ren'ny mpanjaka ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra, izay efa niantso ny alitara tao Betela, izy dia nanatsotra ny tànany niala tamin'ny alitara, nanao hoe:, "Hisambotra azy!"Fa ny tànany, izay efa omena azy, malazo. Ary tsy afaka manovo azy indray izy.
13:5 koa, ny alitara dia triatra nizara masina, ary ny lavenom dia naidiny teo amboniny, araka ny famantarana izay, lehilahin'Andriamanitra, efa naminavina ny tenin 'ny Tompo.
13:6 Ary hoy ny mpanjaka tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra Andriamanitra, "Mangataha ny tavan'ny Tompo Andriamanitrao, ka mivavaha ho ahy, ka ny tanako mba haverina amiko. "Ary ilay lehilahin'Andriamanitra dia nivavaka teo anatrehan'Andriamanitry ny tavan'ny Tompo, ary ny tanan'ny mpanjakan'i naverina tamin'ny laoniny azy, Ary tonga tahaka ny teo aloha.
13:7 Dia hoy ny mpanjaka tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra Andriamanitra: "Andao hiaraka amiko an-trano, mba hiara-misakafo. Fa Izaho no hanome anareo fanomezana. "
13:8 Ary ilay lehilahin'Andriamanitra dia namaly ny mpanjaka: "Na dia hanome ahy iray antsasaky ny fehin'i an-tranonao, Tsy handeha hiaraka aminao aho, tsy nihinan-kanina, na hisotro rano atỳ.
13:9 Fa izany no nandidian'i tamiko araka ny tenin'i Jehovah, Ordering: 'Aza mihinan-kanina, fa ianao kosa tsy hisotro ny rano, ary aza miverina amin'ny lalana efa nalehanao. ' "
13:10 Avy eo dia niala tamin'ny lalan-kafa, ary tsy niverina teny an-dalana izay efa nandeha tany Betela.
13:11 Ary nisy mpaminany zokiolona nipetraka tany Betela. Ny zananilahy ny nandeha ho azy, ary nilaza taminy ny asa rehetra izay, lehilahin'Andriamanitra, efa tanteraka tamin'izany andro izany tao Betela. Ary voalaza any amin'ny rainy ny teny rehetra izay efa niteny tamin'ny mpanjaka.
13:12 Ary ny rainy kosa nanao azy ireo, "Amin'ny alalan'ny Aiza no lalana niala?"Nampiseho ny zanany azy ny lalana izay, lehilahin'Andriamanitra,, izay tonga avy tany Joda, efa lasa.
13:13 Ary hoy izy tamin'ny zanany, "Asio lasely ny boriky ho ahy." Ary nony efa nasiany lasely izany, dia tafakatra amin'ny,
13:14 Ary dia nanaraka ilay lehilahin'Andriamanitra. Ary nahita azy nipetraka teo ambanin'ny hazo terebinta ny. Ary hoy izy taminy:, "Ianao ve ilay lehilahin'Andriamanitra avy tany Joda?"Dia namaly, "Izaho dia."
13:15 Ary hoy izy taminy:, "Andao hiaraka amiko an-trano, mba hihinan-kanina. "
13:16 Fa hoy izy:: "Izaho tsy afaka hiverina, na handeha hiaraka aminao. Ary tsy hihinan-kanina, na hisotro rano atỳ.
13:17 Fa Jehovah no efa niteny tamiko, araka ny tenin 'ny Tompo, nanao hoe:, "Aza mihinan-kanina, fa ianao kosa tsy hisotro ny rano ao amin'io toerana io, ary aza miverina amin'izay lalana efa tonga. "
13:18 Ary hoy izy taminy:: "I, koa, izaho dia mpaminany toa anao. Ary nisy anjely niteny tamiko, araka ny tenin 'ny Tompo, nanao hoe:, 'Ento miverina hiaraka aminao any an-tranonao, ka dia izy hihinan-kanina, sy hisotro rano. ' "Ary dia nentiny namitaka azy.
13:19 Dia nitondra azy niverina niaraka taminy. Dia nihinan-kanina sy nisotro rano tao an-tranony.
13:20 Ary raha mbola nipetraka teo amin'ny latabatra, ny tenin'i Jehovah tonga teo amin'ny mpaminany Izay efa nitondra azy niverina.
13:21 Dia nitaraina, lehilahin'Andriamanitra, izay tonga avy tany Joda, nanao hoe:: "Izao no lazain'i Jehovah: Satria tsy nankatò ny vavan 'ny Tompo, ary tsy nitandrina ny didy izay Jehovah Andriamanitrao nandidy anareo,
13:22 ary nitodika, ary nihinan-kanina, sy nisotro rano tany amin'ny tany izay nandidiany anareo mba tsy mihinan-kanina, na misotro rano: ny fatiny dia tsy ho entina hiverina ho any amin'ny fasan-razanareo. "
13:23 Ary rehefa nihinana sy nisotro, dia nasiany lasely ny borikiny noho ny mpaminany izay efa nitondra indray.
13:24 Ary rehefa lasa, ny liona nahita azy teny an-dalana, ary namono azy, ary ny fatiny no sisa eny an-dalana. Ary ny boriky dia nitsangana teo anilany,. Ary ny liona nijanona teo anilan'ny faty.
13:25 Ary indro, olona izay nandalo nahita ny faty nandry teo am-dalana, ny liona samy nijanona teo anilan'ny tena. Ary izy ireo nandeha ka nataony be mpahalala tao an-tanàna izay be taona mpaminany izay nipetraka.
13:26 Ary rehefa izany mpaminany, Izay efa nitondra azy niverina avy any an-dalana, efa nandre izany, hoy izy:: "Ny lehilahin'Andriamanitra, izay nandà ny vavan 'ny Tompo. Ary ny Tompo nanolotra azy ho amin'ny liona. Ary efa nampifanintontsintona ny tenan'ilay marary masina ka namono azy, araka ny tenin 'ny Tompo, izay nolazainy taminy. "
13:27 Ary hoy izy tamin'ny zanany, "Asio lasely ny boriky ho ahy." Ary nony efa nasiany lasely izany,
13:28 ary efa lasa, dia nahita ny faty nandry teny an-dalana, amin'ny boriky sy ny liona nijanona teo anilan'ny faty. Ny liona tsy nihinana ny faty amin'ny, na izy io no manimba ny boriky.
13:29 Ary ny mpaminany naka ny paty, lehilahin'Andriamanitra,, dia nentiny ho eo ambonin'ny boriky, ary rehefa niverina, dia nitondra azy ho ao an-tanàna ny mpaminany be taona, ka mba hisaona azy.
13:30 Dia nametraka ny fatiny tao amin'ny fasany. Ary nisaona azy, nanao hoe:: "Indrisy! Indrisy! Ny anadahiko!"
13:31 Ary nony efa nisaona azy, hoy izy tamin'ny zanany: "Rehefa maty aho, dia efa, aleveno ao amin'ny fasana izay, lehilahin'Andriamanitra, dia nalevina. Apetraho ny taolako anilan'ny taolany.
13:32 Fa tokoa, ny teny dia tonga, izay nilaza mialoha noho ny tenin 'ny Tompo, ny alitara, izay tao Betela, ary hamely ny Aseraha rehetra amin'ny fitoerana avo, izay any an-tanànan'i Samaria. "
13:33 Rehefa afaka izany teny, Jeroboama tsy mba miverina amin'ny tena fomba ratsy. Fa tsy, ny mifanohitra, nanao mpisorona ho amin'ny fitoerana avo avy tamin'ny kely indrindra ny olona. Na zovy na zovy no vonona, Izy no efa nameno ny tanany, ary dia tonga ny mpisorona amin'ny fitoerana avo.
13:34 Ary noho izany antony, ny taranak'i Jeroboama nanota, ary nanongotra, ary voafafa tsy ho ambonin'ny tany.
1 Mpanjaka 14
14:1 Amin'izany andro izany Abia, , zanak'i Jeroboama,, narary.
14:2 Ary hoy Jeroboama tamin'ny vadiny: "Mitsangàna, ary miova akanjo, mba tsy ho fantatra ho vadin'i Jeroboama. Ka mandehana any Silo, toerana ny mpaminany dia Ahia, izay nilaza tamiko fa tokony hanjaka ity vahoaka ity.
14:3 koa, ento eny an-tananao mofo folo, ary mofo maina, ary ny fitoeran-javatra ny tantely, ka mankanesa any aminy. Fa Izy no hita ho aminao izay ho toetry ny zaza izany. "
14:4 Ny vadin'i Jeroboama nanao araka izay efa nolazainy. Ary nitsangana, dia lasa nankany Silo. Dia tonga tao an-tranon'i Ahia. Fa tsy afaka ny hahita, satria efa nanjavozavo ny masony noho ny fahanterana.
14:5 Ary hoy Jehovah tamin'i Ahia: "Indro, ny vadin'i Jeroboama miditra, ka dia izy mba hanontany anao ny amin'ny zanany, izay marary. Dia hanao hoe ianao zavatra iray ary ny iray hafa ho azy. "Koa, toy ny niditra tao izy, tsy hanolotra ny tenany ho iza izy,
14:6 Ren'i Ahia ny fingodongodon'ny tongony, miditra amin'ny vavahady. Ary hoy izy:: "Midira, Ry vadin'i Jeroboama. Nahoana ianao no mody ho olon-tsy ianao? Fa efa nalefa tany amin'ny henjana aminareo vaovao.
14:7 Mandehana, ka lazao amin'i Jeroboama: 'Izao no lazain'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,: Na dia nanandratra anao tsy ho eo amin'ny vahoaka, ary nomena anao ho mpitarika ny Israely oloko,
14:8 ary nandriatra ny fanjakana ho afaka tamin'ny taranak'i Davida, ary nomeko azy ho anao, Nefa tsy tahaka an'i Davida, mpanompoko, izay nitandrina ny teniko, sy nanaraka Ahy tamin'ny fony rehetra, nanao izay ankasitrahana eo imasoko.
14:9 Fa tsy, no nanaovanao ratsy mihoatra noho izay rehetra teo alohanao ianao. Ary nataonao ho anao andriamani-kafa sy sarin-javatra, mba hampahatezitra Ahy. Ary efa nanary ahy teo ivohonao.
14:10 Izany no antony, indro, Dia hitarika ratsy eo amin'ny taranak'i Jeroboama, ary Izaho hamely avy Jeroboama izay urinates manohitra ny rindrina, ary izay mandringa, ary izay farany amin'ny Isiraely. Ary hodioviko ho afaka izay sisa amin'ny taranak'i Jeroboama, toy ny tain-drorohany dia diovina matetika lasa, raha misy ny fahadiovana.
14:11 Ireo izay efa maty Jeroboama tao an-tanàna, ny alika handevona azy ireo. Ary ireo izay efa maty any an-tsaha, ny voro-manidina handevona azy ireo. Fa Jehovah no efa niteny. '
14:12 Noho izany, tsy maintsy mitsangana, ka mandehana any an-tranonao. Ary tao an-tanàna, amin'ny tena fidirana amin'ny tongotrao, dia ho faty ny zaza.
14:13 Ary ny Isiraely rehetra hisaona azy no, ary handevina azy. Fa izy irery amin'ny tamingan'i Jeroboama dia ho entina ho any am-pasana. Noho ny momba azy, Nisy nahita tsara ny teny avy amin'ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,, tao an-tranon'i Jeroboama.
14:14 Kanefa ny Tompo dia hotendreny ho mpanjaka ho an'ny Isiraely, iza no hamely ny taranak'i Jeroboama, amin'izao andro izao sy amin'izao fotoana.
14:15 Ary ny Tompo Andriamanitra dia hamely ny Isiraely, toy ny volotara matetika hozongozonina any anaty rano. Ary Izy no hongotako ny Isiraely avy tany soa ity, izay nomenao ny razany. Ary Izy no Hikororoka azy an-dafin'ny ony. Fa efa nanao Aseraha ho azy masina, ka dia izy, Efa nanamavo ny Tompo.
14:16 Ary ny Tompo dia hanolotra ny Isiraely, noho ny fahotan'i Jeroboama, izay nanota ka nahatonga ny Isiraely. "
14:17 Ary noho izany, ny vadin'i Jeroboama nitsangana, dia lasa nandeha. Dia tonga tany Tirza. Ary raha niditra tao izy ny tokonam-baravaran'ny trano, dia maty ny zazalahy.
14:18 Ary nalevina, ary ny Isiraely rehetra nisaona azy, araka ny tenin 'ny Tompo, izay nampilazainy ny tanan'ny mpanompony Ahia, ny mpaminany.
14:19 Ary ny sisa amin'ny teny Jeroboama, ny fomba niadiany, ary ny fomba izay no nanjakany, indro, izao no voasoratra ao amin'ny bokin'ny ny tenin 'ny andro mpanjakan'ny Isiraely.
14:20 Ary ny andro nandritra nanjakan'i Jeroboama dia roa amby roa-polo taona. Ary lasa nodimandry any amin'ny razany. ary Nadaba, zanany, no nanjaka nandimby azy.
14:21 Ary Rehoboama, ny zanak'i Solomona, no nanjaka tany Joda. Iraika amby efa-polo taona izy, fony vao nanjaka efa. Ary nanjaka fito ambin'ny folo taona tany Jerosalema, ny tanàna fa ny Tompo dia nisafidy, avy tany rehetra ny firenen'Isiraely, ka mba hametrahany ny anarany. Ary ny anaran-dreniny dia Nama, Amonita.
14:22 Ary ny Joda nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah, ka nampahasaro Azy mihoatra noho izay rehetra nataon'ny razany, noho ny fahotany izay nataony.
14:23 Fa, koa, nanao alitara ho azy, ary ny sarivongana, ary ny Aseraha masina, teny amin'ny havoana andrandraina sy teny ambanin'ny hazo maitso rehetra.
14:24 Koa, ny effeminate tao an-tany, ary nataony ny fahavetavetana rehetra fanaon'ny firenena izay naringan'i Jehovah efa eo anatrehan'i ny Zanak'Isiraely.
14:25 Avy eo, tamin'ny taona fahadimy nanjakan'i 'ny fitondran' Rehoboama, Sisaka, ny mpanjakan'i Egypta, niakatra hamely an'i Jerosalema.
14:26 Dia nobaboiny ny rakitry ny tranon'i Jehovah, ary ny mpanjaka harena, Ary norobainy ny zava-drehetra, anisan'izany ny ampinga volamena izay nataon'i Solomona.
14:27 Ao amin'ny toerana ireo, Rehoboama mpanjaka nanao ampinga varahina, ka dia natolony teo an-tànan'ny ny mpifehy ny mpitondra ampinga, ary ny olona maro izay nitandrina ny fiambenana alina teo am-bavahady ao an-tranon'ny mpanjaka.
14:28 Ary raha ny mpanjaka niditra tao an-tranon'i Jehovah, izao no nentin'ny ireo izay nihazona ny birao hita eo alohany izy. ary rehefa afaka izany,, dia nitondra azy ho any amin'ny trano fitehirizam-piadiana indray ny mpitondra ampinga.
14:29 Ary ny sisa amin'ny tenin 'i Rehoboama, ary izay rehetra nataony, indro, izao no voasoratra ao amin'ny bokin'ny ny tenin 'ny andro mpanjakan'ny Joda.
14:30 Ary niady Rehoboama sy Jeroboama, nandritra ny andro rehetra.
14:31 Ary Rehoboama lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina niaraka taminy tao an-Tanànan'i Davida. Ary ny anaran-dreniny dia Nama, Amonita. Ary Abia zanany no nanjaka nandimby azy.
1 Mpanjaka 15
15:1 Avy eo, tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Jeroboama, ny zanak'i Nebata, Abia no nanjaka tamin'ny Joda.
15:2 No nanjakany telo taona tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Imaka, ny zanakavavin'i Absaloma.
15:3 Ary nandeha tamin'ny fahotana rehetra nataon-drainy, izay nataony teo alohany. Sady tsy nisy ny fony mba nahitsy tamin'i Jehovah Andriamaniny, tahaka ny fon'i Davida, ny rainy.
15:4 Fa noho ny amin'i Davida, Jehovah Andriamaniny nanome fanilo tany Jerosalema, ka mba hanangana handimby azy ny zanany, ary toy izany koa mba hanorina an'i Jerosalema.
15:5 Fa Davida nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah, ary tsy mba mivily miala amin'ny zavatra rehetra izay efa nampianatra azy, nandritra ny andro rehetra niainany, afa-tsy ilay tamin'i Oria, ny Hetita.
15:6 Ary niady Rehoboama sy Jeroboama nandritra ny andro manontolo teo amin'ny fiainany.
15:7 Ary ny sisa amin'ny teny Abia, ary izay rehetra nataony, dia ireo tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny ny tenin 'ny andro mpanjakan'ny Joda? Ary nisy niady Abia sy Jeroboama.
15:8 Ary Abia lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao an-Tanànan'i Davida. ary Asa, zanany, no nanjaka nandimby azy.
15:9 Avy eo, tamin'ny taona faharoa-polo Jeroboama, ny mpanjakan'ny Isiraely, Asa nanjaka tahaka ny mpanjakan'ny Joda,.
15:10 Ary nanjaka efa-polo taona no nanjakany tany iray-tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Imaka, ny zanakavavin'i Absaloma.
15:11 Ary Asa nanao izay mahitsy eo anoloan'ny imason 'ny Tompo, tahaka ny nataon'i Davida rainy.
15:12 Dia nesoriny ny effeminate avy any amin'ny tany. Ary voadiony ny fahalotoany ireo sampy, izay nataon-drainy.
15:13 Koa, dia nesoriny koa ny reniny, Maka, tsy ho ny mpitarika ny fanati-Priapus, ary ny Aseraha masina izay efa natokana. Ary nandrava ny grotto. Dia vaky ny tena mendrika sampy, ary nodorany tao io lohasahan-driaka Kidrona ny.
15:14 Fa ny fitoerana avo, dia tsy naka. Na izany aza tena, ny fon'i Asa tamin'ny marina amin'i Jehovah nandritra ny androny rehetra.
15:15 Ary nentiny nanatona koa ny zavatra izay efa nanamasina ny rainy, ary nivoady tao amin'ny Tranon 'ny Tompo: ny vola, ary ny volamena, ary ny fanaka.
15:16 Ary niady Asa sy Basa,, ny mpanjakan'ny Isiraely, nandritra ny androny rehetra.
15:17 ary Basa, ny mpanjakan'ny Isiraely, niakatra hamely ny Joda. Fa nanao ny Rama, mba tsy hisy ho afaka hivoaka na hiditra amin'ny lafiny Asa, ny mpanjakan'ny Joda,.
15:18 Ary noho izany, Asa naka ny volafotsy sy ny volamena izay efa nitoetra teo amin'ny rakitry ny tranon'i Jehovah, sy tao amin'ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka, ka dia nanolotra azy ho eo an-tànan'ny mpanompony. Ary dia naniraka azy hankany Beni-hadada, ny zanak'i Tabrimona, zanak'i Heziona, ny mpanjakan'i Syria, izay nonina tany Damaskosy, nanao hoe::
15:19 "Misy fifanarahana amiko sy aminao, ary eo amin'ny raiko sy ny rainao. Izany no antony, Dia nirahiko ho any aminareo fanomezam-pahasoavana ho volafotsy sy ny volamena. Ary mangataka aminareo mba handeha ka hivadika ny fifanarahana amin'i Basa,, ny mpanjakan'ny Isiraely, ka mba hialany amiko. "
15:20 Beni-hadada, acquiescing ny mpanjaka Asa, naniraka ny mpitarika ny miaramilany hamely ny tanànan'ny Isiraely. Ary izy ireo namely an'Iona, ary Dan, ary Abel, ny trano Maka, ary Kinerota rehetra, izany hoe, ny tany Naftaly.
15:21 Ary rehefa nandre izany Baasà, dia nitsahatra tamin'ny fanamafisana Rama, dia niverina ho any Tirza.
15:22 Ary Asa mpanjaka kosa naniraka ny fanambarana rehetra Joda, nanao hoe:, "Aoka tsy hisy ho ekeo ny fandavako." Ary nobaboiny ny vato avy any Rama, sy ny hazo, izay Basa efa nohamafisiny io tanàna io. Ary ireo zavatra ireo, Asa mpanjaka nanamboatra an'i Geba ny Benjamina sy Mizpa.
15:23 Ary ny sisa rehetra ny tenin 'i Asa, sy ny heriny manontolo, ary izay rehetra nataony, ary ny tanàna izay nataony, dia ireo tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny ny tenin 'ny andro mpanjakan'ny Joda? Na izany aza tena, tamin'ny andro rehefa antitra, dia fahoriana tamin'ny tongony.
15:24 Ary lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina niaraka taminy tao an-Tanànan'i Davida, ny rainy. ary Josafata, zanany, no nanjaka nandimby azy.
15:25 Na izany aza tena, Nadaba, , zanak'i Jeroboama,, nanjaka tamin'ny Isiraely, tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Asa, ny mpanjakan'ny Joda,. Ary nanjaka tamin'ny Isiraely nandritra ny roa taona.
15:26 Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah. Ary nandeha tamin'ny lalan'i-drainy sy tamin'ny fahotany, izay nampanotany ny Isiraely hanota.
15:27 Ary Basa, ny zanak'i Ahia, amin'ny taranak'Isakara, otrika hamely azy, ary izy namely azy tao Gibetona, izay tanàna Filistina. Fa tokoa, Nadaba sy ny rehetra amin'ny Isiraely ka efa fahirano an'i Gibetona fahizay.
15:28 Ary dia Basa nahafaty azy tamin'ny taona fahatelo nanjakan'i Asa, ny mpanjakan'ny Joda,, ary nanjaka nandimby azy.
15:29 Ary rehefa nanjaka, dia namely ny mpianakavin'i Jeroboama rehetra. Tsy mandao na dia iray fanahiny tsy ho any ny taranany, mandra-namaoka azy, araka ny tenin 'ny Tompo, izay efa nolazain 'ny tanan' Ahia, Silonita,
15:30 noho ny fahotan'i Jeroboama, izay efa nataony, ary izay nampanotany ny Isiraely, ary noho ny fandikan-dalàna izay efa nampahatezitra an'i Jehovah,, ny Andriamanitry ny Isiraely,.
15:31 Fa ny sisa ny tenin 'i Nadaba, ary izay rehetra nataony, dia ireo tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny ny tenin 'ny andro mpanjakan'ny Isiraely?
15:32 Ary niady Asa sy Basa,, ny mpanjakan'ny Isiraely, nandritra ny androny rehetra.
15:33 Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'i Asa, ny mpanjakan'ny Joda,, Basa, ny zanak'i Ahia, nanjaka tamin'ny Isiraely rehetra, tao Tirza, roa-polo-efa-taona.
15:34 Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah. Ary nandeha tamin'ny lalan'i Jeroboama, ary ny fahotany, izay nampanotany ny Isiraely hanota.
1 Mpanjaka 16
16:1 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'i Jeho, ny zanak'i Hanany, Basa, nanao hoe::
16:2 "Na dia nanandratra anao avy tamin'ny vovoka, ary nanendry Anao ho mpanapaka ny Isiraely oloko, mbola ny nandehananao tamin'ny lalan'i Jeroboama, ka efa nahatonga ny Isiraely oloko hanota, ka dia efa nampahatezitra Ahy tamin'ny fahotany.
16:3 Indro, Hokapaiko ny taranany Basa, ary ny taranany tao an-tranony. Fa Izaho hanao ny tranony tahaka ny taranak'i Jeroboama, ny zanak'i Nebata.
16:4 Na zovy na zovy no efa maty Basa tao an-tanàna, ny alika handevona azy. Ary na iza na iza no efa maty azy teo ambanivohitra, ny voro-manidina handevona azy. "
16:5 Ary ny sisa amin'ny teny Basa, ary na inona na inona nataony, sy ny ady, dia ireo tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny ny tenin 'ny andro mpanjakan'ny Isiraely?
16:6 Ary Basa lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao Tirza. ary Elaha, zanany, no nanjaka nandimby azy.
16:7 Ary raha ny tenin'ny Tompo tonga 'ny tanan' ny mpaminany Jeho, ny zanak'i Hanany, Basa, sy ny taranany, ary hamely ratsy rehetra efa nataony eo anatrehan'i Jehovah, ka nampahatezitra Azy noho ny asan'ny tanany, ka dia tonga tahaka ny mpianakavin'i Jeroboama: izany no antony, dia namono azy, izany hoe, ny mpaminany Jeho, ny zanak'i Hanany.
16:8 Tamin'ny taona fahenina amby roa-polo an'i Asa, ny mpanjakan'ny Joda,, Elaha, , zanak'i Basa,, nanjaka tamin'ny Isiraely, tao Tirza, nandritra ny roa taona.
16:9 Ary Zimry mpanompony, iray ny komandin'ny antsasaky ny fehin'i ny mpitaingin-tsoavaly, niodina taminy. Ary Elaha nisotro tao Tirza, ka dia tonga mamo tao an-tranon'i Arza, ny Mpiadidy Tirza.
16:10 Ary Zimry, maika in, namely azy ka namono azy, ao amin'ny amby roa-polo taona fahafito nanjakan'i Asa, ny mpanjakan'ny Joda,. Ary izy no nanjaka nandimby azy.
16:11 Ary rehefa nanjaka, ary efa nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany, dia namono ny mpianakavin'i Basa rehetra. Ary tsy namela na inona na inona vita ireo izay urinates manohitra ny rindrina, eo akaiky na havana sy ny namany.
16:12 Ary noho izany, No nandringanan'i Zimry ny mpianakavin'i Basa rehetra, araka ny tenin 'ny Tompo, izay efa nolazainy tamin'i Basa, ny tanan ny mpaminany Jeho,
16:13 noho ny fahotana rehetra Basa, sy ny fahotan'i Elaha, zanany, izay nanota sy nampanotany ny Isiraely hanota, nampahatezitra ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,, ny zava-poana.
16:14 Fa ny sisa amin'ny teny Elaha, ary izay rehetra nataony, dia ireo tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny ny tenin 'ny andro mpanjakan'ny Isiraely?
16:15 Tamin'ny taona fahafito amby roa-polo an'i Asa, ny mpanjakan'ny Joda,, Nanjaka Zimry hafitoana tao Tirza. Fa ny tafika nanao fahirano an'i Gibetona fahizay dia, tanànan'ny Filistina.
16:16 Ary nony efa reny fa efa nikomy Zimry, ary izy namono ny mpanjaka, rehetra amin'ny Isiraely nampanjaka an'i Omry toy ny mpanjaka ho an'ny tenany; izy no mpitarika ny miaramila tamin'ny Isiraely tao amin'ny toby amin'izany andro izany.
16:17 Noho izany, Omry niakatra, ary ny rehetra amin'ny Isiraely izay nanaraka azy, avy tao Gibetona, ka dia nanao fahirano an'i Tirza.
16:18 Ary Zimry, nahita fa afaka ny tanana momba ny ho voasambotra, niditra ny lapa, Ary nandoro ny tenany miaraka amin'ny tranom-panjakana,. Dia maty izy
16:19 in ny fahotany, izay efa nanota, nanaovany izay ratsy eo anatrehan'i Jehovah, ary nandeha tamin'ny lalan'i Jeroboama, sy ny fahotana, izay nampanotany ny Isiraely hanota.
16:20 Fa ny sisa ny tenin 'i Zimry, sy ny famadihana sy ny jadona, dia ireo tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny ny tenin 'ny andro mpanjakan'ny Isiraely?
16:21 Ary ny lehilahy amin'ny Isiraely dia nizara roa: iray antsasaky ny fehin'i nomba an i Tibny, ny zanak'i Ginata, rehefa nanendry azy ho mpanjaka, ary ny iray nomba an'i Omry antsasaky ny fehin'i.
16:22 Fa ny olona izay nomba an'i Omry naharesy ny olona izay nanaraka Tibny, ny zanak'i Ginata. Ary dia maty Tibny, ary Omry no nanjaka.
16:23 Tamin'ny amby telo-polo taona voalohany nanjakan'i Asa, ny mpanjakan'ny Joda,, Omry no nanjaka tamin'ny Isiraely roa ambin'ny folo taona; no nanjakany enin-taona tao Tirza.
16:24 Ary izy nividy an-tendrombohitr'i Samaria avy any Samera ny talenta volafotsy roa. Fa nanao amboniny, Ary niantso ny anaran 'ny tanàna izay nataony, Samaria, araka ny anaran'i Samera, ny tompon'ny tendrombohitra.
16:25 Fa Omry nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah, eny, nanao ratsy, mihoatra noho izay rehetra efa teo anatrehany izy.
16:26 Ary nandeha tamin'ny lalana rehetra izay nalehan'i Jeroboama, ny zanak'i Nebata, ary ny fahotany, izay nampanotany ny Isiraely, ka dia nampahatezitra an'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,, araka ny zava-poana.
16:27 Ary ny sisa amin'ny teny Omry, sy ny ady izay navoakan'i Nebokadnezara avy, dia ireo tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny ny tenin 'ny andro mpanjakan'ny Isiraely?
16:28 Ary Omry lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao Samaria. ary Ahaba, zanany, no nanjaka nandimby azy.
16:29 Marina tokoa, Ahaba, ny zanak'i Omry,, nanjaka tamin'ny Isiraely tao amin'ny fahavalo amby telo-polo nanjakan'i Asa,, ny mpanjakan'ny Joda,. ary Ahaba, ny zanak'i Omry,, nanjaka tamin'ny Isiraely tao Samaria roa amby roa-taona.
16:30 ary Ahaba, ny zanak'i Omry,, nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah, mihoatra noho izay rehetra efa teo anatrehany izy.
16:31 Ary dia tsy ampy ho azy mba handeha amin'ny fahotan'i Jeroboama, ny zanak'i Nebata. Ankoatry ny, dia naka vady ho an'i Jezebela, ny zanakavavin'i Ita-bala, ny mpanjakan'ny Sidoniana. Ary izy, dia naniasia, ary nanompo an'i Bala, dia niankohoka izy.
16:32 Ary nanorina alitara ho an'i Bala, tao amin'ny tempolin'i Bala, izay nataony tao Samaria.
16:33 Ary nanao tanim-Ala kely Masina. Ary Ahaba nanampy ny asany, nampahatezitra ny Tompo, ny Andriamanitry ny Isiraely,, mihoatra noho ny mpanjakan'ny Isiraely, izay efa teo anatrehany izy.
16:34 Tamin'ny andron'i, Nanorenan'i Hiela avy any Betela ka nanorina Jeriko. miaraka Abìrama, ny lahimatoa, dia nanorina azy, ary Segoba, faralahiny, sazin'ny hananganany ny vavahadiny, araka ny tenin 'ny Tompo, izay efa nolazain 'ny tanan' Josoa, ny zanak'i Nona.
1 Mpanjaka 17
17:1 Ary Elia Tisbita, avy tany Gileada, hoy izy tamin'i Ahaba, "Raha velona koa Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,, izay nahita ny mijoro, tsy hisy ando na orana mandritra ny taona maro, raha tsy amin'ny teny aloaky ny vavako. "
17:2 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tao aminy, nanao hoe::
17:3 "Esory eto, ka mandehana mianatsimo atsinanana, ka afeno ao amin'ny lohasahan-driaka Kerita, izay tandrifin'ny Jordana.
17:4 Ary any no hisotro avy any amin'ny lohasahan-driaka. Ary efa nampianatra ny goaika mba hamelona anao any. "
17:5 Noho izany, dia nandeha izy ka nanao araka ny tenin 'ny Tompo. Ary lasa, dia nonina tamin'ny renirano Kerita, izay tandrifin'ny Jordana.
17:6 Ary ny goaika nitondra mofo sy hena ho azy raha maraina, ary toy izany koa mofo sy hena isan-kariva. Ary nisotro avy any amin'ny lohasahan-driaka.
17:7 Fa rehefa afaka andro vitsivitsy, ny lohasahan-driaka maina. Fa tsy mbola nandatsaka eto an-tany.
17:8 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tao aminy, nanao hoe::
17:9 "Mitsangàna, ka mandehana any Zarefata ny Sidoniana, ka mitoetra ao. Fa efa nampianatra vehivavy iray maty vady any hiandry anao. "
17:10 Dia niainga ka lasa nandeha ho any Zarefata. Ary rehefa tonga teo amin'ny vavahadin'ny tanàna, nahita ny maty vady ny vehivavy manangona hazo, ary niantso azy. Ary hoy Jesosy taminy:, "Omeo ahy rano kely amin'ny fisotroana, mba aho mba hosotroiko. "
17:11 Ary raha nandeha izy mba hitondra azy, dia niantso nanaraka azy, nanao hoe:, "Itondray koa, Miangavy anao aho, sombin-kanina kely eny an-tananao. "
17:12 Ary izy namaly: "Raha Jehovah Andriamanitrao velona, Tsy manana mofo aho, afa-tsy lafarinina eran-tanan'ila ao anaty siny, sy diloilo kely foana ao amin'ny siny hoditra. Jereo, Aho nanangona kitay hazo roa, ka mba hiditra ka manao azy ho an'ny tenako sy zanako, ka mba hihinana azy sy ho faty. "
17:13 Ary hoy Elia taminy: "Aza matahotra. Fa mandehana ary ataovy araka izay nolazainao. Na izany aza tena, aloha, ataovy ho ahy, avy amin'ny iray ihany toto, kely ny mofo mofo ambany lavenona, ary ento atỳ amiko. Ary rehefa afaka izany,, manao ny sasany ho an'ny tenanao sy ho an'ny zanakao.
17:14 Fa izao no lazain'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,: 'Ny tavoara fitondran-koba tsara toto ho azy fa hahomby, na ny tavoahangy ny menaka ho vitsy foana,, mandra-pahatongan'ny andro ny Tompo dia hanome ranonorana eto ambonin 'ny tany.' "
17:15 Ary Maria nandeha ka nanao araka ny tenin'i Elia. Ary nihinana, ary izy sy ny ankohonany nihinana. Ary hatramin'izany andro izany,
17:16 ny tavoara fitondran-lafarinina tsy ho levona, ary ny siny hoditra ny menaka tsy nihena, araka ny tenin 'ny Tompo, izay efa nolazain 'ny tanan' i Elia.
17:17 Ary nitranga fa, Rehefa afaka izany,, ny zanaky ny vehivavy no renin'ny ny fianakaviana narary. Ary ny aretina mahery vaika indrindra, ka tsy nisy fofonaina tao aminy nitoetra.
17:18 Noho izany, hoy ravehivavy tamin'i Elia: "Inona moa no vavolombelona amiko sy aminao, Ry lehilahin'Andriamanitra ô? Efa niditra ho ahy, ka ny heloko fa tsy hotsarovana, ary toy izany koa Ao no hasiako ho faty ny zanako?"
17:11 Ary hoy Elia taminy, "Omeo ahy ny zanakao." Ary naka azy avy-tratrany, ary nitondra azy ho any an-trano ambony, izay ny tenany dia nitoetra. Ary namponina azy teo am-pandriany.
17:20 Dia nitaraina tamin'i Jehovah, ka hoy Izy:, "Tompo ô, Andriamanitra ô, ianao na dia ory ny maty vady amin'ireny izaho no, Azo lazaina, nanampy, mba ho vonoina ho faty ny zanany lahy?"
17:21 Dia niampatra teo anilan'ny zazalahy in-telo. Ary dia nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe:, "Tompo ô, Andriamanitra ô, Aoka ny fanahin'ny zazalahy ity, Miangavy anao aho, hiverina any ny tenany. "
17:22 Ary Jehovah nihaino ny feon'i Elia. Ary ny fanahy ny zazalahy niverina tany aminy, ka dia velona izy.
17:23 Ary Elia nandray ny zaza, ary izy nitondra azy nidina avy tao amin'ny efitra ambony ny ambany anatiny amin'ny tranon'i. Ary dia natolony tamin-dreniny. Ary hoy Jesosy taminy:, "Jereo, velona ny zanakao. "
17:24 Ary hoy ravehivavy tamin'i Elia: "Izany, Takatro izao fa ianao lehilahin'Andriamanitra tokoa, ary ny tenin'i Jehovah aloaky ny vavanao marina. "
1 Mpanjaka 18
18:1 Rehefa ela, ny tenin'i Jehovah tonga tamin'i Elia, tamin'ny taona fahatelo, nanao hoe:, "Mandehana miseho amin'i Ahaba, ka mba hanome ranonorana ambonin 'ny tany. "
18:2 Noho izany, Niainga Elia hiseho amin'i Ahaba. Fa nisy mosary mafy tany Samaria.
18:3 Ary Ahaba niantso an'i Obadia, ny mpitantana ny ankohonany. Obadia dia natahotra an'i Jehovah tokoa,.
18:4 Fa rehefa namono i Jezebela ny mpaminanin'i Jehovah, dia nangalany iray tamin'ny mpaminany zato, ary nafeniny azy, dimam-polo amby dimam-polo, amin'ny lava-bato. Ary novelominy mofo sy rano.
18:5 Ary hoy Ahaba tamin'i Obadia, "Mankanesa any an-tany, ho loharano rehetra, rehetra sy ny lohasaha, fa angamba isika, dia ho afaka ny hahita zavamaniry, hamelomana ny soavaly sy ny ampondra, ka ny biby mpitondra entana mba tsy ho very tanteraka. "
18:6 Ary dia nizara ny faritra samy izy, ka mba handeha hamaky eo aminy. Ahaba nandeha lalana iray irery, ary Obadia kosa nandeha tamin'ny lalana iray.
18:7 Ary raha mbola Obadia teny an-dalana, Elia nifanena taminy. Ary rehefa nahalala an'i Jesosy, dia niankohoka, ka hoy Izy:, "Ianao ve tsy ry Elia tompoko?"
18:8 Ary izy namaly azy: "Izaho dia. Andeha, lazao amin'ny tomponao hoe atsy Elia. "
18:9 Ary hoy izy:: "Ahoana no nanota fa ianao no hanafaka ahy, mpanomponao, ho eo an-tànan'i Ahaba, ka mba hamono ahy?
18:10 Rehefa Jehovah Andriamanitrao velona, dia tsy misy firenena na fanjakana izay tsy tompoko naniraka, mitady anao. Ary izy rehetra namaly, 'Tsy ato Izy,'Nianianany fanjakana tsirairay sy ny firenena ho fianianana, satria tsy hita mihitsy.
18:11 Ary ankehitriny, hoy ianao amiko, 'Mandehana lazao amin'ny tomponao hoe atsy Elia.'
18:12 Ary rehefa ho efa mahafoy anao, ny Fanahin 'ny Tompo dia hitondra anareo ho any amin'ny toerana izay tsy fantatro. ary raha niditra, Dia tatitra tamin'i Ahaba. ary, tsy nahita anao, dia hamono ahy. Kanefa ny mpanomponao natahotra an'i Jehovah avy ao amin'ny fahazazany.
18:13 Moa ve izany tsy efa naharihary taminao, tompoko, izay nataoko tamin'ilay namono i Jezebela ny mpaminanin'i Jehovah: dia ny nanafenako zato lahy avy amin'ny mpaminanin'i Jehovah, dimam-polo amby dimam-polo, amin'ny lava-bato, ary ahoana no nomeko azy ireo mofo sy rano ireo?
18:14 Ary ankehitriny hoy ianao:: 'Mandehana lazao amin'ny tomponao hoe atsy Elia,'Ka mba hamono ahy!"
18:15 Fa hoy Elia:, "Tahaka ny Jehovah, Tompon'ny maro fiainany, alohan'ny ny tavany efa mitsangana eo, izany andro izany dia hiseho aminy. "
18:16 Noho izany, Lasa Obadia nitsena an'i Ahaba, ary nilaza taminy. Ary Ahaba nandeha hitsena an'i Elia.
18:17 Ary nony nahita azy, hoy izy:, "Ianao ve ilay iray izay manelingelina ny Israely?"
18:18 Ary hoy izy:: "Tsy izaho no nampidi-doza tamin'ny Isiraely. Saingy anao, ary ny ankohonan-drainao, izay nandao ny didin 'ny Tompo, ka nanaraka ireo Bala.
18:19 Kanefa tena ankehitriny, maniraha hamory ny Isiraely rehetra ahy, teo amin'ny Tendrombohitra Karmela, mbamin'ny dimam-polo amby efa-jato sy ny mpaminanin'i Bala, sy ny efa-jato mpaminanin'ny Aseraha masina, izay mihinana amin'ny latabatr'i Jezebela. "
18:20 Ahaba naniraka tany rehetra amin'ny Zanak'Isiraely, Ary namory ny mpaminany teo amin'ny Tendrombohitra Karmela.
18:21 Ary Elia, manakaiky ny vahoaka rehetra, nanao hoe:: "Mandra-pahoviana no niahanahana eo amin'ny roa tonta? Raha Jehovah no Andriamanitra, dia manaraha azy. Fa raha Bala kosa, dia manaraha azy. "Ary ny olona tsy namaly azy na dia teny iray ho.
18:22 Ary hoy Elia tamin'ny olona indray: "Izaho irery sisa ho mpaminany 'ny Tompo. Fa ny mpaminanin'i Bala dia dimam-polo amby efa-jato sy lahy.
18:23 Pihavanana dia omby roa aoka homena antsika. Ary aoka izy no hifidy ny iray ho azy omby, ary, manapaka izany ho tapatapany, aoka napetrany teo ambonin'ny kitay. Anefa izy ireo mba tsy mametraka afo ambaniny. Ary hanendry ny omby hafa, ka nametraka azy teo ambonin'ny kitay hazo. Fa izaho kosa dia tsy mametraka afo ambaniny.
18:24 Hiantso ny anaran'ny andriamanitrareo. Ary izaho kosa hiantso ny anaran'i Tompo aho. Ary ilay Andriamanitra izay efa nihaino amin'ny afo, dia aoka Izy no ho Andriamanitra. "Ary ho setrin'ny, hoy ny vahoaka rehetra, "Excellent kevitra."
18:25 Ary hoy Elia tamin'ireo mpaminanin'i Bala: "Fidio omby iray, ary manangona ihany izy aloha. Fa maro. Ary miantsoa ny anaran'ny andriamanitrareo, nefa tsy mametraka afo ambaniny. "
18:26 Ary rehefa nasainy nametraka omby, izay efa nomena azy ireo, dia nanomana azy. Dia niantso ny anaran'i Bala, hatramin'ny maraina ka mandra-pitataovovonan'ny andro, nanao hoe:, "O Bale, hihaino izahay. "Ary tsy nisy feo, sady tsy nisy namaly. Koa araka izany ny nitsambikina teo ambonin'ny alitara izay nataony.
18:27 Ary rehefa nila ho mitataovovonana, Naneso azy ireo i Elia, nanao hoe:: "Miantsoa tamin'ny feo mafy. Fa Izy no andriamanitra, ary angamba izy no miresaka, na any amin'ny tranom-bahiny, na nisy nalehany, na azo antoka mba tsy matory, ka tsy maintsy hofohazina. "
18:28 Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery, ary nitetika ny tenany izy ireo, araka ny fombafomba, amin'ny sabatra sy ny lefona, mandra-rakotra tanteraka ao amin'ny ra.
18:29 Avy eo, rehefa mitataovovonana no lasa, ka dia naminany, efa tonga ny fotoana rehefa nanolotra sorona matetika. Ary tsy nisy feo re, sady tsy misy olona manaraka na mamaly ny vavaka.
18:30 Ary hoy Elia tamin'ny olona rehetra, "Manatòna ahy." Ary ho toy ny olona manakaiky azy, nanorina indray ny alitaran'i Jehovah, izay efa rovitra teo.
18:31 Dia naka vato roa ambin'ny folo, araka ny isan'ny firenen'ny zanak'i Jakoba, izay nanambarana ny tenin'i Jehovah tonga, nanao hoe:, "Isiraely no ho anaranao."
18:32 Fa nanao avy amin'ny vato alitara ho an'ny anaran'i Jehovah. Ary nanao ny hady kely ho an'ny rano, toy ny bavasa eny roa niasa tany, manodidina ny alitara.
18:33 Ary nandahatra ny kitay, ary nanapaka ny omby ho tapa, dia nentiny ho eo ambonin'ny kitay.
18:34 Ary hoy izy:, "Fenoy rano efatra amin'ny fitoeran, ka aidino eo ny Famonoana Tambabe, ary ny tonian'ny hazo. "Ary koa, hoy izy:, "Ataovy izao indray." Ary nony efa nanao izany fanindroany, hoy izy:, "Ataovy izany koa ny fanintelony." Dia nanao izany fanintelony.
18:35 Ary ny rano dia nihazakazaka nidina manodidina ny alitara, ary ny lavaka ny hady kely feno rano.
18:36 Ary nony efa fotoana ny fanatitra dorana ho nanatitra, ny mpaminany Elia, manakaiky, nanao hoe:: "Tompo ô, Andriamanitr'i Abrahama, ary Isaka, ary ny Isiraely, manambara anio fa Hianao no Andriamanitry ny Isiraely,, ary izaho no mpanomponao, ary izay efa nanao, amin'ny rehetra izany, araka ny didy.
18:37 hihaino ahy, Tompo O, hihaino ahy, ity vahoaka ity mba hahazoanareo mianatra fa ianao no Tompo Andriamanitra, ary ianao efa niova fo ny fony indray. "
18:38 Ary ny afo 'ny Tompo dia nikarapoka, ka nandevona ny fanatitra dorana, ary ny hazo, sy ny vato, ary ny vovoka ho, Ary hifantoka tanteraka ny rano tao amin'ny hady kely.
18:39 Ary raha ny olona rehetra no mahita, dia lavo teo amin'ny face, ka hoy izy:: "Ny Tompo mihitsy no Andriamanitra! Ny Tompo mihitsy no Andriamanitra!"
18:40 Ary hoy Elia taminy, "Hisambotra ny mpaminanin'i Bala, ary aza avela na dia iray aza afa-mandositra izy. "Ary rehefa nosamboriny izy ireo, Elia nitondra azy nidina ho any amin'ny ony Kisona, ary izy namono azy teo.
18:41 Ary hoy Elia tamin'i Ahaba: "miakatra; mihinana sy misotro. Fa misy ny feon'ny be dia be ny ranonorana. "
18:42 Ahaba niakatra, ka dia mba mihinana sy misotro. Fa Elia niakatra tany an-tampon'i Karmela, ary nandohalika tamin'ny tany, dia napetrany nataony teo anelanelan'ny lohaliny.
18:43 Ary hoy izy tamin'ny zatovony, "miakatra, ary mandinika dia mivoaka hankany amin'ny ranomasina. "Ary rehefa niakatra tany, ary efa nandinika, hoy izy:, "Tsy misy na inona na inona." Ary koa, hoy izy taminy:, "Miverena any fe-potoana fito."
18:44 Ary tamin'ny fanimpitony, indro, rahona kely niakatra avy tamin'ny ranomasina tahaka ny footstep ny olona. Ary hoy izy:: "miakatra, ka lazao amin'i Ahaba, 'Zioga ho entinareo ny kalesy, ary midina; raha tsy izany, ny orana dia mety hisakana anareo. ' "
18:45 Ary raha izy nitodika ny tenany izany sy izany, indro, dia maizina ny lanitra, ary nisy rahona sy ny rivotra, ary nisy oram-baratra lehibe nitranga. Ary toy izany Ahaba, miakatra, lasa nankany Jezirela.
18:46 Ary ny tànan'i Jehovah dia tao amin'i Elia. Ary cinching ny andilany, dia nihazakazaka teo alohan i Ahaba, mandra-tonga tany Jezirela.
1 Mpanjaka 19
19:1 Ary hoy Ahaba tamin'i Jezebela izay rehetra tatitra nataon'i Elia, sy ny namonoany ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra.
19:2 Ary toy izany Jezebela naniraka olona tany amin'i Elia, nanao hoe:, "Enga anie ny andriamanitra ireo zavatra ireo, ary enga anie izy ireo hanampy ireo zavatra hafa, raha izany ora rahampitso dia tsy nanao ny fiainanao tahaka ny ain'ny iray amin'izy ireo. "
19:3 Noho izany, Elia dia natahotra. Ary nitsangana, dia lasa nankany na aiza na aiza ny sitrapony dia mitondra azy. Ary tonga tao Beri-sheba Joda. Ary nalefany ny mpanompony tao.
19:4 Ary izy nitoetra teo, any an-efitra, iray andro tany. Ary rehefa tonga, ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray, dia nangataka ny ainy izy mba ho faty. Ary hoy izy:: "Fa ampy ahy, Tompo O. Raiso ny fanahiko. Fa Ahy tsy tsara noho ny razako aho. "
19:5 Dia niampatra avy, ka dia natory izy lalina ao amin'ny aloky ny hazo zenevrie. Ary indro, nisy anjelin'ny Tompo nanendry azy, ka nanao taminy hoe:, "Mitsangàna, ka hano."
19:6 Ary nijery, ary indro, teo anilan'ny lohany nisy mofo voaendy ambany lavenona, ary ny fitoeran-drano. Avy eo dia nihinana sy nisotro izy, ary indray dia natory lalina.
19:7 Ary Ilay Anjelin'i Jehovah niverina fanindroany, dia nanendry azy, ka nanao taminy hoe:: "Mitsangàna, mihinana. Fa lehibe lavitra indray mitsangana eo anatrehanao. "
19:8 Ary nony efa nitsangana, dia nihinana sy nisotro izy. Ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany hanina efa-polo andro sy efa-polo alina, hatrany an-tendrombohitra 'Andriamanitra, Horeba.
19:9 Ary rehefa tonga tany, dia nitoetra tao anaty lava-bato. Ary indro, ny tenin'i Jehovah tonga tao aminy, ka nanao taminy hoe:, "Inona no ataonao aty, Elia?"
19:10 Dia namaly: "Efa tena be zotom-po teo amin'ny anaran'ny Tompo, ny Andriamanitry ny maro. Fa ny Zanak'Isiraely nahafoy ny fanekenao. Efa rava ny alitaranao. Efa namono ny mpaminaninao tamin'ny sabatra. I irery sisa. Ary izy ireo mitady ny aiko, mba handraisako azy izy. "
19:11 Ary hoy izy taminy:, "Hivoaka ka hitsangana eo an-tendrombohitra eo anatrehan'i Jehovah." Ary, indro, ny Tompo nandalo. Ary nisy rivotra be sady mahery, nandrovitra mitokana any an-tendrombohitra, ary nanorotoro ny harambato teo alohan 'ny Tompo. Nefa Jehovah tsy tao amin'ny rivotra. Ary manarakaraka ny rivotra, nisy horohoron-tany. Nefa Jehovah tsy tao amin'ny horohoron-tany.
19:12 Ary manarakaraka ny horohorontany, nisy afo. Nefa Jehovah tsy tao amin'ny afo. Ary manarakaraka ny afo, nisy ny bitsika ny tsio-drivotra malefaka.
19:13 Ary rehefa nandre izany Elia, nanaronany ny havany amin'ny ny lambany, sy nivoaka, dia nijanona teo amin'ny fidirana amin'ny lava-bato. Ary indro, nisy feo nanao taminy hoe, nanao hoe:: "Inona no ataonao aty, Elia?"Dia namaly:
19:14 "Efa tena be zotom-po teo amin'ny anaran'ny Tompo, ny Andriamanitry ny maro. Fa ny Zanak'Isiraely nahafoy ny fanekenao. Efa rava ny alitaranao. Efa namono ny mpaminaninao tamin'ny sabatra. I irery sisa. Ary izy ireo mitady ny aiko, mba handraisako azy izy. "
19:15 Ary hoy Jehovah taminy: "Mandehana, ka hiverina amin'izay lalan-kalehanareo, tany an-efitra, ho any Damaskosy. Ary rehefa tonga any ianao, dia hosory Hazaela ho mpanjakan'i Syria.
19:16 Ary ianao, dia hosory Jeho, , zanak'i Nimsy,, ho mpanjakan'ny Israely. fa Elisa, ny zanak'i Safata, izay avy Abela-mehola, dia hosory ho mpaminany ao an-toerana.
19:17 Ary izao no ho: na iza na iza no tsy voan'ny tsy ho voan'ny sabatr'i Hazaela, dia hatao maty amin'ny Jeho. Ary na iza na iza no tsy voan'ny avy ny sabatr'i Jeho, dia hatao maty amin'ny Elisa.
19:18 Ary dia hiala ho niaro fito arivo lahy teo amin'ny Isiraely, izay tsy nisy lohalika Nanenjana teo anatrehan'i Bala, sy ny vava rehetra izay tsy niankohoka izy, fifanorohana tanana. "
19:19 Noho izany, Elia, fametrahana nivoaka avy teo, nahita an'i Elisa, ny zanak'i Safata, niasa tamin'ny roa ambin'ny folo omby folo. Ary izy dia iray tamin'ireo ireo izay niasa tamin'ny roa ambin'ny folo lahy omby roa mikambana. Ary nony efa lasa nandeha i Elia taminy, dia nanipy ny kapôtiny hanarona ny azy.
19:20 Ary niaraka tamin'izay dia, namela ny omby, dia nihazakazaka nanaraka an'i Elia. Ary hoy izy:, "Miangavy anao aho mba hamela ahy hanoroka ny raiko sy ny reniko, ary avy eo dia hanaraka anao aho. "Ary hoy izy taminy:: "Mandehana, ary hiverina. Fa izay Ahy ny hanao, Efa nanao momba anao. "
19:21 Avy eo, niverina avy aminy, dia naka ny omby roa, ary izy namono azy ireo. Ary nahandro ny nofony mbamin'ny angadin'omby ny omby. Dia nomeny ho an'ny olona, ary dia nihinana. Ary nitsangana, dia nandeha izy ka nanaraka an'i Elia, dia nanompo azy.
1 Mpanjaka 20
20:1 Ary Beni-hadada, ny mpanjakan'i Syria, namory ny tafika manontolo. Ary nisy mpanjaka roa amby telo-polo niaraka taminy, sy soavaly ary kalesy. ary niakatra, izy ka namely an'i Samaria, ary nataony fahirano ny tanàna.
20:2 Ka naniraka olona ho any an-tanàna, tamin'i Ahaba, ny mpanjakan'ny Isiraely,
20:3 hoy izy:: "Izao no lazain'i Beni-hadada: Ny volafotsinao sy ny volamenanao dia ahy. Ary ny vadinareo sy ny tsara indrindra lahy dia ahy koa. "
20:4 Ary ny mpanjakan'ny Isiraely namaly, "Sitraky ny teninao, ny mpanjaka tompoko, anao aho, mbamin'izay rehetra eo Ahy. "
20:5 Ary ny olona, niverina, nanao hoe:: "Izao no lazain'i Beni-hadada, izay naniraka anay hankatỳ aminao: Ny volafotsinao sy ny volamenanao, ary ny vadinareo sy ny zanakareo, dia omeo ahy.
20:6 Noho izany, rahampitso, amin'izao ora izany, Izaho raha maniraka ny mpanompoko ho aminareo, ary any no hitadiavako an-tranonao sy ny tranon'ny mpanomponao. Ary izay rehetra mahafaly azy ireo, dia nataony an-tanany ka haka. "
20:7 Ary ny mpanjakan'ny Isiraely nampaka ny loholona rehetra amin'ny tany, ka hoy Izy:: "Aoka ny fanahinareo tandremo, dia ho hitanao fa manao fitaka izy hamely anay. Fa naniraka ho any amiko noho ny vady aman-janak'ireo, ary ny volafotsy sy ny volamena. Ary tsy nandà. "
20:8 Ary ny lehibe rehetra amin'ny teraka, ny olona rehetra, hoy izy taminy:, "Tokony tsy hihaino, na sitrapon'Andriamanitra azy. "
20:9 Ary noho izany, dia namaly ny irak'i Beni-hadada: "Lazao amin'ny mpanjaka tompoko: Ny zava-drehetra momba izay nirahinao tamiko va aho tamin'ny voalohany, Izaho mpanomponao hatao. Fa izany zavatra izany, Ka izaho tsy mahay manao. "
20:10 Ary niverina, ny iraka nitondra izany ho azy, ary izy naniraka indray ka nanao hoe:, "Enga anie ny andriamanitra manao ireo zavatra ireo tamiko, ary enga anie izy ireo hanampy ireo zavatra hafa, raha ny vovok'i Samaria dia ampy mba hameno ny tànan'izay rehetra ny olona manaraka ahy. "
20:11 Sy ny fandraisana andraikitra, ny mpanjakan'ny Isiraely:, "Lazao azy fa Izay misikina tsy tokony hirehareha toy ny anankiray izay ungirded."
20:12 Avy eo dia nitranga fa, rehefa Beni-hadada izany teny izany efa nandre, izy sy ireo mpanjaka dia nisotro tao amin'ny lay. Ary hoy izy tamin'ny mpanompony, "Hisakambina ny tanàna." Ary izy ireo manodidina azy.
20:13 Ary indro, mpaminany iray, manakaiky an'i Ahaba, ny mpanjakan'ny Isiraely, hoy izy taminy:: "Izao no lazain'i Jehovah: tokoa, ianao nahita izany ireo olona maro be izaitsizy tokoa manontolo? Indro, Hatolotro eo an-tananao anio, ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah. "
20:14 Ary hoy Ahaba, "Iza?"Ary hoy izy taminy:: "Izao no lazain'i Jehovah: Ny miaramila an-tongotra ny mpitarika fanapahana isan-tokony. "Ary hoy izy:, "Iza no tokony hanomboka hanao ady?"Ary hoy izy:, "Ianao dia tokony."
20:15 Noho izany, dia naka ny fanisam ny mpanompon'ny mpitondra fanapahana isan-tokony. Ary nahita ny isa ho telo-polo amby roan-jato roa. Ary ny mpanjaka nametraka azy ireo mba araka ny olona, ny Zanak'Isiraely, izay fito arivo.
20:16 Dia lasa nandeha izy ireo amin'ny mitataovovonana. Fa Beni-hadada nisotro; dia mamo tao an-trano fialofany, ary ireo mpanjaka roa amby telo-polo niaraka taminy, izay tonga tany mba hanampy azy.
20:17 Dia hoy ny mpanompon 'ny mpitarika ny fanapahana isan-tokony nivoaka ho any amin'ny toerana voalohany, eo anoloany. Ary noho izany, Beni-hadada naniraka, ary nilaza taminy, nanao hoe:: "Ry no nivoaka avy Samaria."
20:18 Ary hoy izy:: "Raha tonga ny fandriampahalemana, hisambotra azy ireo velona; raha hanao ady, hisambotra azy ireo velona. "
20:19 Noho izany, ny mpanompon 'ny mpitarika ny fanapahana isan-tokony nivoaka, ary ny sisa amin'ny miaramila nanaraka.
20:20 Ary samy namono ny lehilahy izay tonga hamely azy. Ary nandositra ny Syriana, ary nanenjika azy ny Isiraely. koa, Beni-hadada, ny mpanjakan'i Syria, nandositra an-tsoavaly, ny mpitaingin-tsoavaliny.
20:21 Fa ny mpanjakan'ny Isiraely, mandeha mivoaka, namely ny soavaly sy ny kalesy, ary dia namely ny Syriana be dia be.
20:22 Avy eo dia nisy mpaminany, nanakaiky ny mpanjakan'ny Isiraely, hoy izy taminy:: "Mandehana, ka ho hery. Ary fantaro ka izahao izay ataonareo. Fa amin'ny taona manaraka, ny mpanjakan'i Syria hitsangana hanohitra anao. "
20:23 Ary tena, ny mpanompon 'ny mpanjakan'i Syria hoy izy taminy: "Ny Andriamanitr'izy ireo ny andriamanitry ny tendrombohitra; noho io, efa manafotra anay. Fa tsara kokoa isika hiady taminy teo Arbota, ary avy eo isika dia handresy azy.
20:24 Noho izany, raha hanao izany ianao teny: Esory ny mpanjaka tsirairay avy ny miaramilanao, ka nametraka komandin'ny amin'ny toerany.
20:25 Ary hisolo ny isan'ny miaramila izay efa voakapa ny anao, ary ny soavaly, araka ny isan'ny soavaly aloha, ary ny kalesy, araka ny isan'ny kalesy izay nananany fahiny Izy. Ary isika dia hiady taminy teo Arbota, ary ho hitanareo fa isika dia haharesy azy. "Dia natoky ny torohevitra, ka dia nanao izany.
20:26 Noho izany, araka ny fizarana ny taona, Beni-hadada naka fanisam Syriana, ary niakatra tany Afeka, ka mba hiady tamin'ny Israely.
20:27 Dia ny zanak'Israely voalamina, ary naka vatsy, dia niainga ho any amin'ny lafiny mifanohitra. Ary namelatra ny toby manatrika azy ireo, toy ny osy andiany kely roa osy. Fa ny Syriana kosa nanenika ny tany.
20:28 Ary na dia lehilahy iray Andriamanitra, manakaiky, hoy izy tamin'ny mpanjakan'ny Isiraely: "Izao no lazain'i Jehovah: Satria ny Syriana nilaza hoe:, 'Jehovah no Andriamanitry ny tendrombohitra, Fa Izy tsy mba Andriamanitry ny tany lemaka,'Izaho dia hanolotra ireo olona maro be rehetra izany eo an-tananao, ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah. "
20:29 Ary mandritra ny fito andro, andaniny sy ny ankilany tsirairay nandamina ny ady andalana. Avy eo, amin'ny andro fahafito, ny ady dia nanoratra. Ary ny Zanak'Isiraely nahafaty, avy amin'ny Syriana, iray hetsy miaramila an-tongotra indray andro.
20:30 Ary ireo izay sisa nandositra nankany Afeka, any an-tanàna. Ary ny manda dia voafafy teny amin'ny fito amby roa arivo lahy ireo izay efa nitoetra. Ary Beni-hadada, nandositra, niditra tao an-tanàna, tao amin'ny efi-trano teo anaty efitrano iray hafa.
20:31 Ary ny mpanompony nanao taminy hoe:: "Indro, efa renay fa mpanjaka ny mpianakavin 'i Isiraely maneho famindrampo. Ary noho izany, aoka isika lamba fisaonana ny valahany manodidina, ary ny mahazaka ny lohanay, ary aoka isika hivoaka ho any amin'ny mpanjakan'ny Isiraely. Angamba hovelominy ny fiainantsika. "
20:32 Dia nofonosiny lamba fisaonana ny valahany manodidina, ary nametraka mahazaka ny lohany. Ary dia nankany amin'ny mpanjakan'ny Isiraely, ka hoy ireo taminy:: "Ny mpanomponao, Beni-hadada, hoy i: 'Aho, masina Hianao, mamindrà aoka ho velona ny fanahiko.' "Ary hoy izy:, "Raha mbola velona, dia izy no rahalahiko. "
20:33 Ireo lehilahy nanaiky izany ho toy ny famantarana tsara. ary maika, dia nitondra ny teny avy amin'ny vavany, ka hoy izy:, "Beni-hadada ny rahalahinao." Ary hoy Izy taminy:, "Mandehana, ka ento etỳ amiko. "Koa, Beni-hadada nandeha nanatona azy, dia nanandratra azy teo kalesiny.
20:34 Ary hoy izy taminy:: "Ny tanàna izay nalain'ny raiko tamin'ny rainao, Hody. Ary mety ho arabe ho anao any Damaskosy, tahaka ny nataon'ny raiko tany Samaria. Ary rehefa efa nanao fifanarahana, Dia hiala avy aminao. "Koa, dia namorona ny fifanarahana aminy, Ary dia nalefany.
20:35 Ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny zanaky ny mpaminany, niteny tamin'ny mpiara-miasa, araka ny tenin 'ny Tompo, "Asio aho." Fa izy tsy vonona ny hamely.
20:36 Ary hoy izy taminy:: "Satria ianao tsy vonona ny hanaraka ny feon 'ny Tompo, indro, ianao dia hiala amiko, ary ny liona hamono anao ho. Ary rehefa lasa lavitra avy aminy, ny liona nahita azy, ka namono azy.
20:37 Fa eo nahita lehilahy hafa, hoy izy taminy:, "Asio aho." Dia namely azy, ary naratra azy.
20:38 Dia lasa ilay mpaminany. Dia nihaona ny mpanjaka teny an-dalana, ka niova ny tarehiny tamin'ny vovoka afafy manodidina ny vavany sy ny masony.
20:39 Ary raha ny mpanjaka efa nandalo, dia niantso tamin'ny mpanjaka, ka hoy Izy:: "Izaho mpanomponao nankany hanao hiady amin'ny faritra akaiky. Ary rehefa efa nandositra ny olona iray, dia nisy olona nitondra azy ho any amiko, ka hoy Izy:: 'Tandremo ity lehilahy ity. Fa raha Saika haka taratasy famenoana lasa, ny fiainanao dia haka ny toerana teo amin'ny fiainany, na dia mandanja volafotsy talenta iray. '
20:40 Ary raha mbola varimbariana, nitodika fomba iray ary ny iray hafa, tampoka, dia tsy ho hita. "Ary ny mpanjakan'ny Isiraely nanao taminy hoe:, "Io ny fitsarana, izay ianao no didy. "
20:41 dia avy hatrany, dia amin'ny tondro-molotra ny vovoka avy ny tavany, ary ny mpanjakan'ny Isiraely nahalala an'i Jesosy, fa anankiray amin'ny mpaminany.
20:42 Ary hoy izy taminy:: "Izao no lazain'i Jehovah: Noho ny afaka amin'ny an-tananao ny lehilahy izay tokony hahafaty, ny fiainanao dia haka ny toerana teo amin'ny fiainany, ary ny olona haka ny tany ny vahoakany. "
20:43 Ary toy izany ny mpanjakan'ny Isiraely niverina tany an-tranony, tsy te hihaino, ary ny fahatezerana niditra tao Samaria.
1 Mpanjaka 21
21:1 Ary rehefa afaka izany,, amin'izany andro, nisy tanim-boalobok'i Nabota, Jezirelita, izay tao Jezirela, afa-tsy ny lapan'i Ahaba,, ny mpanjakan'i Samaria.
21:2 Noho izany, Ahaba niteny tamin'i Nabota, nanao hoe:: "Omeo ahy ny tanim-boaloboka, ka Mba hanolorako ny tenako ny fambolen'anana. Fa teo akaiky teo, ary eo anilan'i an-tranoko. Ary homeko ho anao, nandimby azy, tanim-boaloboka tsara. Na raha mihevitra azy io ho mety aminao kokoa, Izaho no hanome anareo ny vola, tsy hanenenana na inona na inona. "
21:3 Nabota namaly azy, "Enga anie ny Tompo mamindrà fo amiko, fandrao omeko anao ny tanin-drazako. "
21:4 Ary Ahaba nankao an-tranony, tezitra sy ny fikitroha-nify eo ny teny izay Nabota, Jezirelita, efa nolazainy taminy, nanao hoe:, "Tsy homeko anao ny tanin-drazako." Sady namoaka ny tenany teo am-pandriany, izy nampihodina ny tavany nankany amin'ny rindrina, ary tsy nety nihinan-kanina.
21:5 Ary Jezebela, ny vadiny, niditra taminy, ka nanao taminy hoe:: "Inona no zavatra izany, izay ny fanahinao efa malahelo? Ary nahoana no tsy mihinan-kanina?"
21:6 Ary izy namaly azy: "Tsy niteny tamin'i Nabota, Jezirelita, ary hoy izy taminy: 'Omeo ahy ny tanim-boaloboka, ary manaiky vola. Na Raha sitraky anao, Dia homeko anao ny tanim-boaloboka tsara kokoa, nandimby azy. 'Ary hoy izy:, 'Tsy homeko anao ny tanimboaloboko.' "
21:7 Ary Jezebela, ny vadiny, hoy izy taminy:: "Ianareo ny fahefana lehibe, ary Hianao no manjaka tsara ao amin'ny fanjakan'ny Israely. Mitsangàna, ka nihinan-kanina, ka na dia tezitra. Dia homeko ny tanim-boalobok'i Nabota, Jezirelita, ho anao."
21:8 Ary noho izany, Jezebela dia nanoratra taratasy tamin'ny anaran'i Ahaba,, ary izy ireo nanisy tombo-kase tamin'ny peratra fanombohany. Ary dia naniraka tamin'izay lehibe no firazanany, ary ny manan-kaja tao an-tanàna sy miaina miaraka amin'ny Nabota.
21:9 Ary izao no fitsarana ny taratasy: "Miantsoa andro fifadian-kanina, ka hahatonga Nabota mba hipetraka any amin'ny voalohany mpanapaka ny vahoaka.
21:10 Ary naniraka roa lahy, ny tena ratsy fanahy, azy. Ary aoka izy ireo hitory ny vavolombelona mandainga: 'Efa niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka. "Ary avy eo dia ento, fa aza, ka torahy vato, dia aoka izy ho faty. "
21:11 Ary hoy ny mpiray olom-pirenena, izay lehibe amin'ny alalan'ny niteraka ary ny manan-kaja izay nonina niaraka taminy tao an-tanàna, nanao araka izay efa nampianatra azy ireo hoe Jezebela, ary araka ilay voasoratra ao amin'ny taratasy izay efa nalefa tany aminy.
21:12 Dia niantso andro fifadian-kanina, Ary nampandeha Nabota mba hipetraka any amin'ny voalohany mpanapaka ny vahoaka.
21:13 Ary nandroso nitondra lehilahy roa, zanaky ny devoly, dia nahatonga azy ireo hipetraka tandrifiny. ary izy ireo, manao tokoa ny olona toy ny devoly, vavolombelona niteny azy teo imason'ny olona maro: "Efa niteny ratsy an'Andriamanitra ny Nabota sy ny mpanjaka." Noho izany,, dia nitondra an'i Jesosy ho, any an-dafin'ny tanàna, ary namono azy ho faty amin'ny alalan'ny fitoraham-bato.
21:14 Dia naniraka tany amin'i Jezebela, nanao hoe:, "Efa notoraham-bato Nabota, ka dia maty. "
21:15 Avy eo dia nitranga fa, Jezebela efa reny fa voatora-bato Nabota ka maty, dia hoy izy tamin'i Ahaba: "Mitsangàna, ka alao ho anao ny tanim-boalobok'i Nabota, Jezirelita, izay tsy vonona ny sitrapon'Andriamanitra ianao, ary ny hanome izany anao ho takalon'ny vola. Fa tsy velona intsony Nabota fa, fa efa maty. "
21:16 Ary rehefa nandre izany Ahaba, izany hoe, fa efa maty Nabota, dia niainga izy ka nidina tany amin'ny tanimboalobok'i Nabota, Jezirelita, ka dia izy mba haka ny tany ho azy.
21:17 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'i Elia, Tisbita, nanao hoe::
21:18 "Mitsangàna, ka midina hihaona amin'i Ahaba,, ny mpanjakan'ny Isiraely, izay any Samaria. Indro, dia nidina ho any amin'ny tanim-boalobok'i Nabota, ka mba haka ny tany ho azy.
21:19 Ary ianao dia hiteny aminy, nanao hoe:: 'Izao no lazain'i Jehovah: Hianareo efa nahafaty. Ary koa, ianao koa naka ho. 'Ary rehefa afaka izany,, dia hametraka: 'Izao no lazain'i Jehovah: Eto amin'ity toerana ity, izay efa nilelafan'ny alika ny ran'i Nabota, dia ihany koa ny hilelafan'ny ny ra. ' "
21:20 Ary hoy Ahaba tamin'i Elia, "Efa nahita ahy ho fahavalonao?"Ary hoy izy:: "Efa nahita anao mba namidy, mba hanao izay ratsy eo imason 'ny Tompo:
21:21 'Indro, Dia hitarika ny ratsy noho ny aminao. Ary hokapaiko ny taranany. Ary hataoko maty Ahaba urinates na inona na inona manohitra ny rindrina, ary na inona na inona ny mandringa, ary na inona na inona no farany teo amin'ny Isiraely.
21:22 Ary hataoko an-tranonao mba ho tahaka ny taranak'i Jeroboama, ny zanak'i Nebata, sy tahaka ny taranak'i Basa,, ny zanak'i Ahia. Fa efa nanao zavatra mba nahatezitra Ahy, ary toy izany koa izay nampanotany ny Isiraely. '
21:23 Ary ny amin'i Jezebela koa dia, ny TOMPO tamin'i, nanao hoe:: 'Ny alika dia lanin'ny Jezebela tany an-tany Jezirela.
21:24 Raha toa ka efa maty Ahaba tao an-tanàna, ny alika handevona azy. Fa raha ta-maty any an-tsaha, ny voro-manidina handevona azy. ' "
21:25 Ary noho izany, tsy nisy olona hafa mitovy amin'ny Ahaba, izay namidy ka nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah. Fa ny vadiny, Jezebela, nanery azy tamin'ny.
21:26 Ary dia tonga fahavetavetana, loatra ka dia nanaraka ny sampy izay Amorita nataony, izay tian'i Jehovah nandevona eo anatrehan'i ny Zanak'Isiraely.
21:27 Avy eo, rehefa Ahaba efa nandre ireo teny ireo, dia nandriatra ny fitafiany, Ary nataony ny lamba volon'osy fisaonana ny vatany, Ary nifady hanina, ka dia natory izy amin'ny lamba fisaonana, Ary nandeha tamin'ny lohany downcast.
21:28 Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'i Elia, Tisbita, nanao hoe::
21:29 "Efa tsy hita ny fomba ny fanetren-tenan'i Ahaba teo anatrehako? Noho izany, satria efa nanetry tena izy noho ny amiko, Tsy mitarika amin'ny ratsy, mandritra ny androm-piainany. Fa tsy, nandritra ny andro ny zanany, Hataoko mihatra amin'ny loza tany an-tranony. "
1 Mpanjaka 22
22:1 Ary telo taona no lasa tsy niady Syria sy ny Isiraely.
22:2 Fa tamin'ny taona fahatelo, Josafata, ny mpanjakan'ny Joda,, nidina ho any amin'ny mpanjakan'ny Isiraely.
22:3 Ary ny mpanjakan'ny Isiraely tamin'ny mpanompony, "Moa fantatrareo fa antsika Ramota-gileada no, sady nilaza fa tsy nanao tsirambina ny hitondra azy amin'ny tanan'ny mpanjakan'i Syria?"
22:4 Ary dia hoy izy tamin'i Josafata, "Ho tonga any amin'ny ady amiko, teo Ramota-gileada?"
22:5 Ary hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'ny Isiraely: "Tahaka ahy, dia tahaka izany koa ianareo. Ny oloko sy ny olonao dia iray. Ary ny mpitaingin-tsoavaliny dia ny mpitaingin-tsoavaliny. "Ary hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'ny Isiraely, "Miangavy anao aho mba hanontany amin'izao fotoana izao ny tenin 'ny Tompo."
22:6 Noho izany, ny mpanjakan'ny Isiraely dia nanangona ny mpaminany, tokony ho efa-jato lahy, ary hoy izy taminy, "Tokony handeha ho any Ramota-gileada hiady, na tokony ho amin'ny fiadanana?"Namaly izy ireo, "miakatra, ary ny Tompo no hanome azy ho eo an-tananao izy, ry mpanjaka. "
22:7 Dia hoy Josafata:, "Moa tsy eto manokana mpaminanin'ny Tompo, mba hanontaniantsika aminy?"
22:8 Dia hoy ny mpanjakan'ny Isiraely tamin'i Josafata: "Ny lehilahy iray mbola, izay ahazoantsika ho afaka hanontany ny Tompo: Mikaia, ny zanak'i Jimla. Saingy halako izy. Fa tsy maminany soa ho ahy, fa loza ihany. "Ary hoy Josafata, "Tsy tokony hiteny toy izany, Ry mpanjaka ô. "
22:9 Noho izany, ny mpanjakan'ny Isiraely niantso ny tandapa anankiray, ka hoy izy taminy:, "Mandehana faingana mba hitondra eto Mikaia, , zanak'i Jimla. "
22:10 Ary ny mpanjakan'ny Isiraely, ary Josafata, ny mpanjakan'ny Joda,, dia samy nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany manokana, mitafy zatra mpanjaka fitafiana, ao amin'ny tokotany teo akaikin'ny fidirana amin'ny vavahadin'i Samaria. Ary ny mpaminany rehetra naminany dia eo imasony.
22:11 koa, Zedekia, , zanak'i Kenana,, nanamboatra tandroka vy, ka hoy Izy:, "Izao no lazain'i Jehovah: Raha ireo, dia nandrahona Syria, mandra-handringana azy. "
22:12 Ary ny mpaminany rehetra naminany toy izany koa ireo, nanao hoe:: "Niakatra tany Ramota-gileada, dia mivoaha ho any fahombiazana. Fa ny Tompo dia hanolotra azy eo an-tanan'ny mpanjaka. "
22:13 Ary tena, ilay iraka izay nandeha hiantso Mikaia niteny taminy, nanao hoe:: "Indro, ny tenin 'ny mpaminany, toy ny vava iray ihany, dia mialoha soa ho an'ny mpanjaka. Noho izany, Aoka ny teninareo ho tahaka ny azy, ka lazao izay tsara. "
22:14 Fa hoy Mikaia: taminy, "Raha velona koa Jehovah, na inona na inona ny Tompo dia efa nilaza tamiko, izany no holazaiko. "
22:15 Ary noho izany dia nandeha tany amin'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka taminy, "Mikaia, tokony handeha ho any Ramota-gileada hanao ady, sa tokony hitsahatra?"Ary Jesosy namaly azy, "miakatra, dia mivoaha ho any fahombiazana, ary ny Tompo dia hanolotra azy eo an-tanan'ny mpanjaka. "
22:16 Fa hoy ny mpanjaka taminy, "Hadiniko anao nampianiana, indray ary indray, mba tsy hilaza na inona na inona amiko afa-tsy izay marina, amin 'ny anaran' ny Tompo. "
22:17 Ary hoy izy:: "Hitako ny Isiraely rehetra niely any amin'ny tendrombohitra, toy ny ondry tsy misy mpiandry. Ary hoy ny Tompo:: 'Ireto efa tsy manan-tompo. Aoka ny tsirairay amin'izy ireo hiverina any an-tranony soa aman-tsara. ' "
22:18 Noho izany, ny mpanjakan'ny Isiraely tamin'i Josafata: "Tsy efa voalazako taminao va fa na inona na inona maminany soa ho ahy, fa loza ihany mandrakariva?"
22:19 Na izany aza tena, mitohy, hoy izy:: "Noho ny, hihaino ny tenin 'ny Tompo. No nahitako ny Tompo nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianany. Ary ny rehetra eny amin'ny lanitra dia nitsangana teo anilany,, ho amin'ny ankavanana sy any amin'ny ankavia.
22:20 Ary hoy ny Tompo:, 'Iza no hamitaka an'i Ahaba, ny mpanjakan'ny Isiraely, dia mba miakatra ka ho lavo any Ramota-gileada?'Ary ny anankiray niteny toy izany teny, ary ny iray hafa niteny fa raha tsy izany.
22:21 Ary nisy fanahy fa nivoaka ka nijanona teo anatrehan'i Jehovah. Ary hoy izy:, 'Izaho no hamitaka azy.' Ary hoy Jehovah taminy, 'Amin'ny fomba ahoana?'
22:22 Ary hoy izy:, 'Hivoaka aho, ary Izaho ho tonga fanahy mandainga ao am-bavan'ny mpaminaniny rehetra. 'Ary hoy ny Tompo:: 'Ho hamitaka azy, ary Hanjaka. Mivoaha, ka ataovy izany. '
22:23 Koa ankehitriny, indro: ny Tompo dia nanome fanahy mandainga ao am-bavan'izay mpaminaninareo rehetra izay eto. Ary Jehovah efa nilaza ny loza hanjo anao. "
22:24 Fa Zedekia, , zanak'i Kenana,, nanatona ka namely Mikaia ny valanoranony, ka hoy Izy:, "Ary amin'izany, manana ny Fanahin 'ny Tompo nandao ahy, ary niteny taminareo?"
22:25 Dia hoy Mikaia:, "Ary hita eo amin'ny andro izay, no hiditra ao amin'ny efitrano iray ao anatin'ny efitrano, mba manafina ny tenanao. "
22:26 Ary ny mpanjakan'ny Isiraely:: "Raiso Mikaia, ary aoka izy hiara-mitoetra amin Amona, ny komandin'ny tanàna,, ary Joasy, ny zanak'i Amalech.
22:27 Ka lazao aminy: 'Izao no lazain'ny mpanjaka: Ataovy io lehilahy io tany am-ponja, ary hanohana azy ny mofom-pahoriana, ary ny rano fahoriana, mandra-piveriko soa aman-tsara. ' "
22:28 Dia hoy Mikaia:, "Raha efa niverina soa aman-tsara, ny Tompo dia tsy niteny amin'ny alalako. "Ary hoy izy:, "Aoka ny olona rehetra handre izany."
22:29 Ary noho izany, ny mpanjakan'ny Isiraely, ary Josafata, ny mpanjakan'ny Joda,, niakatra tany Ramota-gileada.
22:30 Dia hoy ny mpanjakan'ny Isiraely tamin'i Josafata: "Ento ny fiadiana, ary hiditra ny ady. Ary hitafy ny fitafiana eo. "Hoy anefa ny mpanjakan'ny Isiraely nanova ny fitafiany, Ary niditra tao amin'ny ady.
22:31 Fa ny mpanjakan'i Syria efa nampianatra ny roa amby telo-polo mpifehy ny kalesy, nanao hoe:, "Aza miady na iza na iza, kely na lehibe, afa-tsy hamely ny mpanjakan'ny Isiraely ihany. "
22:32 Noho izany, raha ny mpifehy ny kalesy nahita an'i Josafata, dia ahiana fa izy no mpanjakan'ny Isiraely. Ary manao ny fanafihana mahery vaika, dia niady taminy. Ka dia niantsoantso Josafata.
22:33 Ary ny mpifehy ny kalesy fantany fa tsy ny mpanjakan'ny Isiraely, koa araka izany ny dia nivily niala taminy.
22:34 Fa nisy kosa lehilahy Nanenjana ny tsipìkany, mikendry ny zana-tsipìka tsy misy certitude, Ary sendra namely ny mpanjakan'ny Isiraely, eo amin'ny havokavoka ary ny vavoniny. Avy eo dia hoy izy tamin'ny mpampandeha ny kalesiny, "Mihodina ny tananao, ka ento ahy niala teo ny tafika, fa efa nisy naratra mafy. "
22:35 Avy eo dia noraisiny ny ady nandritra izany andro izany. Ary ny mpanjakan'ny Isiraely dia nitsangana teo amin'ny kalesiny tandrifin'ny Syriana, ka dia maty tany amin'ny hariva. Fa ny rà no nikoriana avy tamin'ny voa ho ao amin'ny tonon-taolana 'ny kalesy.
22:36 Ary ho mpitory nanambara eran 'ny tafika manontolo, teo anoloan'ny milentika ny masoandro, nanao hoe:: "Aoka ny tsirairay samy hody any an-tanànany, sy ho any amin'ny taniny. "
22:37 Dia maty ny mpanjaka, ka dia nentiny ho any Samaria. Ary no nandevenana ny mpanjaka tao Samaria.
22:38 Dia nanasa ny kalesiny any amin'ny farihy Samaria. Dia avy ny alika nilelaka ny ràny. Dia nanasa ny voa, araka ny tenin 'ny Tompo izay efa nolazainy.
22:39 Fa ny sisa ny tenin 'i Ahaba, ary izay rehetra nataony, sy ny trano ivory izay naoriny, ary ny tanàna rehetra izay naorina, dia ireo tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny ny tenin 'ny andro mpanjakan'ny Isiraely?
22:40 Ary noho izany, Ahaba lasa nodimandry any amin'ny razany. ary Ahazia, zanany, no nanjaka nandimby azy.
22:41 Na izany aza tena, Josafata, ny zanak'i Asa, Efa nanomboka nanjaka tamin'ny Joda tamin'ny taona fahefatra nanjakan'i Ahaba,, ny mpanjakan'ny Isiraely.
22:42 Izy dia dimy amby telo-polo taona izy, fony vao nanjaka efa, ary nanjaka roa-polo-dimy taona tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Azoba, ny zanakavavin'i Sily.
22:43 Ary nandeha tamin'ny lalana nalehan'i Asa manontolo, ny rainy, ka tsy mivily miala izany. Ary nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah.
22:44 Na izany aza tena, dia tsy naka ny fitoerana avo. Fa ny olona mbola namono zavatra hatao fanatitra sy nandoro ditin-kazo manitra teny amin'ny fitoerana avo.
22:45 Ary Josafata nanana fihavanana tamin'ny mpanjakan'ny Isiraely.
22:46 Fa ny sisa ny tenin 'i Josafata, sy ny asa nataony, ary ny ady, dia ireo tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny ny tenin 'ny andro mpanjakan'ny Joda?
22:47 Avy eo, koa, ny sisa amin'ny effeminate, izay nitoetra tamin'ny andron'i Asa, ny rainy, dia nobaboiny avy any amin'ny tany.
22:48 Tamin'izany fotoana izany, tsy nisy mpanjaka voatendry tao Idomea.
22:49 Na izany aza tena, Josafata mpanjaka efa nanao tafika an-dranomasina teny ambonin'ny ranomasina, izay mety sambo ho any Ofira noho ny volamena. Fa izy ireo tsy afaka mandeha, fa ny sambo dia rava ny fanjakana.
22:50 Ary Ahazia, , zanak'i Ahaba,, hoy izy tamin'i Josafata, "Aoka ny mpanompony handeha hiaraka amiko mpanomponao ny sambo." Kosa Josafata tsy vonona.
22:51 Ary Josafata lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina niaraka taminy tao an-Tanànan'i Davida, ny rainy. ary Jorama, zanany, no nanjaka nandimby azy.
22:52 Ary Ahazia, , zanak'i Ahaba,, vao nanjaka tamin'ny Isiraely, in Samaria, amin'ny fahafito ambin'ny folo taona nanjakan'i Josafata,, ny mpanjakan'ny Joda,. Ary nanjaka tamin'ny Isiraely nandritra ny roa taona.
22:53 Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah. Ary nandeha tamin'ny lalan-drainy sy ny reniny, ary tamin'ny lalan'i Jeroboama, ny zanak'i Nebata, izay nampanotany ny Isiraely hanota.
22:54 koa, dia nanompo an'i Bala, ka dia niankohoka izy, ary nataony nampahatezitra an'i Jehovah, ny Andriamanitry ny Isiraely,, araka izay rehetra nataon-drainy.